कोहीबेला म च्यापुमा हात राखेर सोच्छु, आखिर किन चाहिँ इन्द्रबहादुर राईको 'विचार' यताका युवा सर्जकहरूको निम्ति आकर्षण बनेन ? 'तेस्रो आयाम' र 'लीलालेखन'मा लाग्ने भारतीय नेपाली सर्जकहरू को को हुन्? नेपालतिर केही लेखकहरूले लीलाको बाटो हिँडेर कहीँ पुग्ने सक्ने स्पेस देखे। जो जो लीला समातेर केन्द्रमा आएका छन्, उनीहरूले आफ्नो बाटो आफैं खनेका होइनन्, उनीहरू इबराले खनेको सहज बाटोमा छन्।
तेस्रो आयामले 'सम्पूर्णता' लेख्न नसकेको इबरा आफैंले घोषणा गरेको दिन नै 'तेस्रो आयाम' मरिसकेको हो, यद्यपि इबराका फलोवरहरू तेस्रो आयाम अहिलेसम्म बाँचेको भ्रम पोखिबस्छन्। दुई एउटा लेखकले 'लीला'मा मनपरी गरेको भरमा लीलालेखन बाँचेको भ्रम पनि उनीहरूसित छँदैछ। पश्चिमबाट आइडिया टिपेर लीलालाई पूर्वीय फ्लेवर दिने इबराको निम्ति लीला सन्दर्भ बारम्बार तन्किरहनु नै सफलता हो।
इन्द्रबहादुर राई भारतको कांग्रेस आईलाई विश्वास गर्ने लेखक पनि थिए। कांग्रेस आईले नै देशलाई अंग्रेजहरूबाट मुक्त गर्ने संग्राममा लाग्ने गोर्खा योद्धाहरूको मूल्यांकन नगरेपछि जातीय कवि अगमसिंह गिरीले 'युद्ध र योद्धा' लेखे। अगमसिंह गिरी जो भारतका गोर्खाहरूलाई 'तिमी त यहाँ नचिनिने भइसक्यौ' भनेर कविता लेखेर देशमा गोर्खाझैं अल्पसंख्यकहरूको पहिचान खोज्ने चेतना बाँड्ने कवि हुन् । यस्ता कविहरूको लेखनलाई इबराहरू 'च्याप्टो लेखन' देख्थे ।
नेपालका कृष्ण धरावासीहरू राईलाई ईश्वर नै मान्छन् । उनीहरूभन्दा फरक विचारका विश्वासीहरू ईश्वरलाई पनि भक्तलाई दास बनाउने सामन्ती र उनीहरूमाथि शासन गर्ने सत्ता देख्छन् । त्यतिखेर पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता थियो।
बंगालमा ३० वर्ष टिक्ने सरकार पनि यही थियो। राज्यमा कम्युनिस्ट सरकार भएपछि कम्युनिस्ट वा माक्र्सवादी लेखकहरूको सिजन लाग्नु स्वाभाविक हो। उतिखेर हिरोइज्मको खुब विरोधी थिए प्रगतिवादी लेखक। इन्द्रबहादुर राईलाई उनीहरू 'बुर्जुवा लेखक' मान्थे। त्यसो भनेको इबरालाई मन परेन। उनले 'साहित्यको अपहरण' भन्ने किताब नै लेखे।
काठमाडौं जाँदा मलाई साथीहरू हपाछन्, 'इन्द्रबहादुर राई झैं शिखरलाई गाली गर्ने ? ' मलाई लाग्छ दार्जिलिङको भूमि (वा भारतका गोर्खाहरूको सामाजिकताको सन्दर्भमा) मा आयाम र लीलाले दिएको विचारले त्यहाँको समाजलाई दिएको बाटो खोज्नुलाई 'गाली' मान्ने हो भने त 'साहित्यको अपहरण'लाई के मान्नु?
मलाई त्यो किताब पढ्दा ठूलो मान्छेले शिष्ट भाषामा लेखेको संसारको सबैभन्दा भद्दा 'टेस्क्ट' लाग्छ । संसारका महान् गालीहरूमा सबैभन्दा उत्कृष्ट लाग्छ ।
नेपालका कति साथीहरूले हामीलाई इबरामाथिको हाम्रो धारणा सुनेर 'युनिभर्सिटीलाई च्यालेन्ज गर्ने फुचुना' मान्छन् । हामी भने युनिभर्सिटीमा पढाइने 'सिलेबस'को कुरा गरिरहेका छौं। इन्द्रबहादुर राई यसैलाई 'लीला' भन्छन्।
'साहित्यको अपहरण' बंगालको भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यसमेत रहेका प्रगतिवादी लेखकहरूले कांग्रस आईका हिमायती इन्द्रबहादुर राईलाई भन्ने गरेको 'बुर्जुवा लेखक'को जवाफ थियो।त्यसको प्रतिवाद प्रगतिवादी लेखकहरूले गर्नु परेन किनभने इबरा आफंैलै लीलामा 'माक्र्सवाद' हुलेर साहित्यको अपहरण गर्ने 'आइडियोलजी' ग्रहण गरे। वास्तवमा यो पनि 'लीला' नै थियो।
नेपालका लीलावादी एक लेखकलाई इबराले एक भेटमा भनेछन्, 'त्यो 'साहित्यको अपहरण' भन्ने किताब छापेर हतार गरेछु । मृत्युपछि छाप्ने किताब थिएछ त्यो।'इबराको जीवनमा ज्ञान चिप्लाइको यो सबैभन्दा ठूलो नमुना थियो।
मैले जीवनमा इबरालाई तीनपल्ट भेटेको छु। पहिलोपल्ट भेट्दा इबरा मृत्युचिन्तामा थिए। यसो त अहिलेको उनको उमेर सन्त हुने नै हो । 'मरेपछि मानिसले आफूसित ज्ञानसमेत लाँदैन', भन्थे, 'सोच्दै जाँदा म त सन्त हुँदोरहेछु।'
आयाम र लीलापछि उनले अहिले विचार गरिरहेको विचार हो-बहुल्यवादी प्रतिबद्धता। साहित्यमा समावेशी एप्रोच। 'जुत्ताको लेस सिद्धान्त' अर्थात् ज्योफ्री चिउको बुटस्ट्राप थ्योरी। 'हाम्रो नेपाली साहित्यलाई हामीले अझै नयाँ समयसँग मिल्ने गरेर ल्याउन सकेका छैनौं,' इबरा भन्छन्,' जसरी राजतन्त्रवादी देशहरूमा प्रजातन्त्र आएको छ, त्यसरी नै नेपाली साहित्यमा प्रजातन्त्रवादी विचारधारा ल्याउनुपर्छ।'
लीलापछि आएको उनको यो विचारलाई उनी आफैंले ज्योफ्री चिउको कुरा नगरी बुटस्ट्राप थ्योरीसित दाँजेका छन्। 'अहिलेसम्मका समालोचना सिद्धान्तले एकजनालाई ठूलो पार्ने काम गरेको छ। सबैलाई एक समान हेर्नुपर्छ भन्ने समालोचना सिद्धान्त आएको छैन,' राईले यतातिर भनिरहेका छन्, 'त्यो एक समानले हेर्ने सिद्धान्त हो बुटस्ट्राप थ्योरी, जो नेपालीमा आएको छैन। विश्वमा ३०÷३५ वर्षअघि आइसकेको छ।'
कमसेकम अहिले आएर नयाँ पुस्ताले 'सबैलाई एक समानले हेर्ने' समालोचना सिद्धान्त ल्याउने काम गरोस् भन्ने राईको यो 'विचार' आजको समयमा चल्दै गरेको विचारको 'सम्मान' त हो नै।मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ, 'साहित्यमा समयसम्मत लेखनतिर तपाईंहरूको विचार योजनाबद्ध र प्रतिबद्ध थिएन? '
त्यतिखेर मलाई लागेको थियो, साहित्यमा 'कमिटमेन्ट' भन्ने कुरा नै नहुने विचारका राईहरूको वैचारिक प्रतिबद्धता के हो त ? लेखनलाई समयले निर्देशित गर्ने 'उत्तर' राईको थियो । अहिले आएर बुटसस्ट्राप थ्योरीलाई 'हिरोइज्म'को विरुद्ध खडा गर्नुपर्ने खाँचोबोध आजको समयलाई गरिएको अध्ययन नै त हो।
तेस्रो आयामले 'सम्पूर्णता' लेख्न नसकेको इबरा आफैंले घोषणा गरेको दिन नै 'तेस्रो आयाम' मरिसकेको हो, यद्यपि इबराका फलोवरहरू तेस्रो आयाम अहिलेसम्म बाँचेको भ्रम पोखिबस्छन्।
जतिखेर दार्जिलिङका प्रगतिवादीहरूले उनलाई बुर्जुवा भनिरहेका थिए, त्यतिखेरको समयबोध थियो- साहित्यको अपहरण । त्यतिखेर त्यो पुस्तिका प्रकाशित भएपछि केवल दार्जिलिङका मात्र होइन, नेपालकै माक्र्सवादीहरूको विशाल समूहले तिनको आलोचना गर् यो।
त्यो आलोचनालाई इबराका फ्यानहरूले राईलाई 'खुइल्याइरहेको' (राजन मुकारुङको शब्द) ठान्छन्। त्यतिखेर चर्चाको चुलीमा पुगेका राईहरूले त्यतिखेरको समयलाई पक्रेका होलान् । तर त्यतिखेरको समयमा आयामबोध र लीलाबोध नै चाहिँ 'एब्सोल्युट ट्रुर्थ' थिएन। यस अर्थमा आयाम र लीलाले पनि आफ्नो सत्यलाई मात्र सत्य मानेर आए । उनका विचार ग्राहकलाई त्यही कुरा दिए।
सत्यकै सन्दर्भमा पनि राईले 'आफूले देखेको सत्य नै लेख्छु' भनेका हुन्। वास्तवमा उनले अरू सत्यहरूको अस्तित्वलाई पनि स्वीकारेका हुन् अनि देखिएका जम्मै सत्य नहुने विश्वासले जीवन र जगत्लाई 'लीला' बुझ्ने कोसिस गरेका हुन्। त्यही कोसिसको निरन्तरता नै सबैलाई समान दृष्टिले हेर्ने सिद्धान्तको खोज हो। जो ज्योफ्री चिउको बुटस्ट्राप थ्योरीमा उनले पाएका छन्।
यो पनि लीला नै हो, जतिखेर समान दृष्टिले समाज र वर्गलाई हेर्नुपर्छ भन्ने प्रगतिवादीहरूको आवाज थियो, त्यसलाई मिचेर आयाम आयो। आयाममा सैद्धान्तिक कमजोरी देखेपछि लीला आयो। लीलाले विशेष मत त विचारलाई हिरो बनाएको देखेपछि अहिले सबैलाई समानले हेर्ने सिद्धान्तको खोजी गरिरहेका छन्। यो लीलाको लीला पनि बढो लीलामय छ।
'हिजो हामीलाई जे लेख्न लायो, लेख्यौं। आजले जे लेख्न लाउँदैछ, लेख्दैछौं। भोलिले जे लेख्न लाउँला लेखौंला,' यसो त राईले मसितको एक भेटमा यसो भनेकै हन्, 'लेखनमा व्यर्थमा कोही बदल्दैन। कुनै विचारिक प्रक्रममा बद्लिन्छ।' तर राईको अहिलेको यो 'बद्लाई' निक्कै रोमाञ्चक छ। किनभने राई अहिले बाहुल्यवादी प्रतिबद्धताबारे चिन्तना गरिरहेका छन् । र, त्यसलाई व्यावहारिक बनाउने बाटो खोजिरहेका छन्।
इन्द्रबहादुर राईहरूको आयाम र लीलाको अस्तित्व दाबी गर्ने नयाँ पुस्ता छैन । इतिहास र परम्परालाई सम्मान गर्ने अनि आफ्नो बाटो आफैं बनाउने जुन पुस्ता आजको छ, उनीहरूले चलिरहेको लीलामा अर्को स्पेस भेट्दैन, जसले आजको समय, समाज र धारालाई अध्ययन गर्न सिकाओस्।
नेपाली प्रजातन्त्र भोग्ने पुस्तालाई राजतन्त्रीय, सामन्ती चलखेलबारे बुझ्ने विचार 'लीला'ले कसरी दिन्छ ? त्यो बुझ्न कृष्ण धरावासीहरूका कृतिहरू पढ्नुपर्ला। तर, उनीहरूले लेखेका जेसुकै चाहिँ लीला होइनन्। त्यो लीला कृतिमा आउँदा पात्रहरूले भोगेका रंगीन जीवन, एउटै जीवनका अनेकौं रङ, अनेकौं संघर्ष, अनेकौं तिर्खा, अनेकौं भ्रमहरू आउला तर पढ्नेले ती भ्रम, रङ, संघर्षको केन्द्रमा जीवनको सही अर्थ पनि खोज्लान्।
कुनै पनि एक पात्रको जीवन ऊ आफैंले बनाएको जीवन होइन। त्यो जीवन कुनै शक्तिले, त्यो शक्तिका प्रभावले, योजनाले, स्वार्थले, सिद्धान्तले पनि तयार हुन्छ। जीवन र जगतको निर्माणमा दर्शनहरूको लगानी कति, सत्ता, कानुन, नियम र परम्पराहरूको लगानी कति? जीवनमा जीवनकै लगानी कति, ज्ञानहरू, विचारहरू, सिद्धान्तहरूको लगानी कति ? यी जम्मै प्रश्न केवल लीलाधारणा होइनन्।
यता इन्द्रबहादुर राई आफंै चाहिँ लीलाबाट पनि उम्केर नेपाली साहित्यमा नै प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहेका छन्। समानताको कुरा गरिरहेका छन् । के उनका फलोवर्सहरूले इन्द्रबहादुर राईसित उनका नयाँ बनिएको यी विचारबारे संवाद गरिरहेका होलान् त?
के आजको समय र जीवनलाई जुत्ताको लेसले बाँधेर एउटा गोलमेचमा ल्याउन सक्ला त? भारतमा भाजपाले चलाइरहेको 'हिन्दुराष्ट्रवाद'को नारालाई इबराको बहुल्यवादी प्रतिबद्धताले हेर्ने आँखा कस्तो हुन्छ? अल्पसंख्यकहरू, दलित, आदिवासीहरूलाई नष्ट गर्ने केन्द्रीय राजनीतिको नियतलाई हेर्ने बाटो कस्तो हुन्छ? अचम्म लाग्छ, मानिस जहिल्यै प्रश्नहरू बोकेर किन उभिन्छन्? के यो पनि लीला नै हो?
- See more at: http://www.annapurnapost.com/News.aspx/story/45302#sthash.eJbkThso.dpuf
तनाव माने कविता
हैदराबाद युनिभर्सिटीका दलित विद्यार्थी रोहित वेमुलाको आत्महत्याले देशलाई नक्कली राष्ट्रवादको अजिंगरले निलिसकेको प्रमाण दिइसकेको थियो।
धर्मलाई लिएर हुने राजनीतिको बीउ बोकेको भाजपा अल्पसंख्यकहरूको सांस्कृतिक शक्तिदेखि डराउँछ। देशभरिका अधिकांश विद्यार्थीमा बढ्दो माक्र्सवादी चेतनाको विकाससित नडराउने त कुरै आएन। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकहरूको प्रश्नको हत्या गर्ने र उनीहरूको आवाजलाई राष्ट्रद्रोही बनाउने कारखाना नै मिडिया भइदिएपछि देशमा ‘असहिष्णुता' माथि बौद्धिकहरू खुलेर आउनु स्वाभाविक थियो।
वेमुलाहरूले धार्मिक राजनीतिको नियत बुझाउन फिल्ममेकर नकुल साउनेको 'मुजफ्फर नगर बाँकी है' डोकुमेन्ट्री देखाउन खोजेका थिए। तर, देशले 'प्रश्नको हत्या' हेर्न पर्‍यो। यहीँबाट सरेको तनाव जेएनयूसम्म पुगिसकेको थियो।'कल्चरल इभेन्ट' भनेर लेफ्ट विद्यार्थीले अफजल अनि मकबुल भट्टको स्मृतिमा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिरहेको थियो।
एवीबीपीले रोक्यो। नाराबाजी चल्यो। यसैबीच जी न्युजले एउटा समाचार देखायो, त्यसपछि देशमा बबाल सुरु भयो। पुलिसले कन्हैया, उमर खालिद, आशुतोष कुमार, रामा नागा, अनिर्वान भट्टाचार्य, अनन्त प्रकाश नारायणविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्‍यो तर पक्राउ पर्यो कन्हैया।
‘पाकिस्तान जिन्दावाद' भनेको अनि उनीहरू देशद्रोही रहेको आरोप उनीहरूमाथि थियो।
म मिडियाकृत भाजपीय कूटनीतिले उदांगो पारेको संकटबीच पनि दार्जिलिङको राजनीतिमाथि गम्भीर बनिरहेको थिएँ। देश जतातिर हिँडिरहेको छ, मेरै उमेरका ती विद्यार्थीलाई त्यो ठीक लागिरहेको थिएन। मानिसमा मानिसलाई फर्काइल्याउने चेतनाकर्मीहरूसित मौन संवाद चलिरहेको बेला म दार्जिलिङको राजनीतिले गिजोलेको समयलाई पत्रिकामा समेट्ने प्रयासमा थिएँ।
'समकालीन एजेन्डा' राजनैतिक पत्रिका सुरु गरिरहेको थिएँ अनि सम्पादनमा जुटिरहेको थिएँ। यस्तैमा नेपालको सिमरा पुगेर कविता सुनाउनुपर्ने कार्यक्रम आइपुग्यो।
विचार, आवाज र प्रश्नहरूलाई मार्न जेएनयूमा फासिष्टहरूले खेलिरहेको भूमिकालाई मिडियाले कसरी आगो थपिरहेको छ अनि नक्कली राष्ट्रवादको डढेलो सल्काइरहेको छ, त्यसलाई मनमा खेलाइरहेको बेलासम्म मलाई कुनै कविताको याद आइरहेको थिएन।
उता मिडियाले साम्यवादी चेतनामाथि विष खन्याइरहेको बेला यता म समकालीन एजेन्डामा भारतीय नेपालीहरूको अनुहार कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने चिन्तामा थिएँ। कविताबारे त कोसौं दूरसम्म कुनै विचारको झिल्का उठेको थिएन। सिमरालाई के सुनाउँछु होला, मलाई साँच्चै केही थाहा थिएन।
मलाई पछिल्लो समय कहिले कविता लेखेँ, थाहा छैन । राजा पुनियानी शृंखला कविता निरन्तर लेखिरहेका थिए। लेखनाथ छेत्री लेखिएको उपन्यासको सम्पादनमा जुटिरहेका थिए। टीका भाइ सांगठानिक काम लिएर गाउँगाउँ घुमिरहेका थिए।
भूपेन्द्र सुब्बा अफिसका फाइलहरू पल्टाइरहेका थिए। प्रदीप लोहागुणहरू चलिरहेको राजनैतिक चिन्ता लिएर डम्बरचौकतिर बराल्लिरहेका थिए। म कोठामा चुपचापसित लेखिरहेको थिएँ।
'आवरण कथा'को लागि तयार पार्दै गरेको लेख यति मात्र लेखिसकेको थिएँ' 'डा. हर्कबहादुर छेत्रीहरूले अब्दुल कलामको एउटा भनाइलाई आचारसंहिता बनाउनुपर्ने हो, किनभने कलामले भनेका छन्' सफलताको रहस्य के हो? सही निर्णय, सही निर्णय कसरी? अनुभवबाट, अनुभव कसरी? गलत निर्णयहरूबाट। डा. छेत्रीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा बसेर धेरै गल्ती गरेका छन्, धेरै गलत निर्णयहरू गरेका छन्।
जनताले उनको बुद्धिमाथि भरोसा गरेका हुन्, त्यो भरोसा यथार्थमा रूपान्तर भएन। डा. छेत्रीले जुन भ्रष्टाचारहरूको कुरा गरिरहेका छन्, त्यसले पाएको स्पेसको कारण उनीझैं पार्टीका इन्टेलिजेन्सियाहरूको अयोग्यता हो।
विमल गुरुङलाई केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको इन्टेलिजेन्सियाहरूको जमात स्टडी फोरमले गुरुङको काँचो दिमागमा पाकेको कुरा हाल्न नसक्नु वास्तवमा नै अकल्पनीय अयोग्यता थियो। वास्तवमा यी इन्टेलिजेन्सिया जमातको चुक के थियो भने उनीहरूले इन्टिलेक्चुअल जमातको कुरा सुनेनन्।
त्यतिखेर दलबाहिरका आलोचक वा बौद्धिकहरू भनिरहेका थिए, 'राजनीतिज्ञ र ब्युरोक्र्याट फरक हन्, मोर्चाका नेताहरूले होइन, जीटीए योग्य शिक्षितहरूले सञ्चालन गर्नुपर्छ।' जीटीए तर नेताले चलाए...।'
सुबास घिसिङलाई चुनौती दिएर स्थापित भइसकेका विमल गुरुङलाई चुनौती दिएर डा. हर्कबहादुर छेत्रीहरू 'जन आन्दोलन पार्टी' लिएर आएदेखि दार्जिलिङको राजनीति सञ्चो छैन।
यसरी चारैतिर राजनीतिले गिजोलेको बेला गिरिजा अधिकारी अनि वेद भट्टले कविता सुनाउन सिमरा बोलाएर मलाई न्याय गरे कि अन्याय ? हिँड्नुअघि मसित यति प्रश्न थियो। त्यही प्रश्न बोकेर म यात्रामा निस्किएँ ।
मर्दै गइरहेको सेन्सिटिभिटी
कवि लेखनाथ छेत्रीसित भने, 'सिमरा जानुपर्ने भो जान्छौ मसित?' लेखनाथले मलाई ‘नाई' भनेको कुनै घटना छैन । सिलगढी झर्ने भएँ । ‘समकालीन एजेन्डा'का प्रकाशक शिशिर शर्मालाई भने, ‘लौ नेपाल जानुपर्ने भो।' उनी पनि तयार।
समर्पण रेडियो सिमराले आयोजन गरेको कार्यक्रमको नाम थियो' मनोज बोगटीको प्रतिनिधि कवितावाचन। काँकडभित्ताबाट नाइटबस पक्रिएर हिँडेको हामी तीनमध्ये शिशिर शर्मालाई कवितासित खासै चासो छैन। मलाई चाहिँ असाध्य छटपटि थियो।
पछिल्लोपल्ट कहाँ कसलाई कविता सुनाएँ त्यो पनि थाहा थिएन। मञ्चमा चढेर कविता सुनाउने बानी लगभग हराइसकेको थियो। वास्तवमा नयाँ कविता नभएकोले पुरानो कविताको ब्याज कति खानु? को पिरले म मञ्चतिर जान छोडिसकेको थिएँ।
म असाध्य डराइरहेको थिएँ। मलाई लागेको थियो, प्रतिनिधि कविताको कार्यक्रम हो, स्टेजस्ट्रेस खप्न सकिनँ भने म सकिन्छु। मलाई नेपालका श्रोताहरूसित असाध्य डर लाग्छ, किनभने उनीहरूले कवितामाथि सवाल उठाउँछन्। कमजोर चेतनाका कवि एकैजना दह्रो श्रोताको प्रश्नले मर्न सक्छन्।
वास्तवमा म मभित्र मर्दै गइरहेको सेन्सिटीभिटीसित डराइरहेको थिएँ। कविता छुटिसकेको थियो। साहित्यिक लेखन छुटिसकेको थियो । नेपालका राम्रा पत्रिकाका पृष्ठ संयोजकले मागिराखेको रचना दिन सकिरहेको थिइनँ । विनोदविक्रम केसीले दुइपल्ट कोसिस गरे।
मबाट लेखिएन। अमृत ढकालजस्ता जाँगरिला धेरै भाइहरू बोल्नै छोडिसकेका छन् । मचाहिँ राजनीतितिर चासो राख्ने भइसकेको थिएँ । दीपक सापकोटा, राजा पुनियानी, लेखनाथ छेत्रीहरूले हपारेका शब्दहरू इन्बक्समा त्यत्तिकै छन्। म लेख्न नसक्ने भइसकेको थिएँ।
वास्तवमा म आफ्नै खोजीमा लागिसकेको थिएँ । यो लोकतान्त्रिक देशमा म कहाँ छु? आखिर के छ त्यो राजनीतिमा जसले मजस्ता लाखौंको धारिला चेतनालाई बोधो पार्ने रेती घोट्छ। मानिस किन राजनीतिको पुच्छर बन्छ? किन नेताको भाषणले जनताको पुच्छर हल्लिन्छ?
किन राजनीतिले हाम्रा सपनाको व्यापार गर्छ ? किन मार्छ राजनीतिले मान्छे ? वास्तवमा म निरन्तर कविताको खोजीमा छु। जतिखेर म कविता सुनाउन सिमरातिर गइरहेको थिएँ, मेरो हातमा थियो अरुन्धति रोयको 'लिसनिङ टु ग्रासहोप्पर।'
भारतमा लोकतन्त्र कुन चराको नाम हो, रोय बताउने कोसिसमा थिइन्। त्यही लोकतन्त्र दार्जिलिङमा कुन ठोकेकोदारको नाम हो, म जोड्दै थिएँ। राजनैतिक ठेकेदारहरूले हाम्रा सपनाको कारोबार फैलाउन थालेदेखि यहाँ कोही पनि युवा सद्दे छैनन्। बिरामी छन्। तीमध्ये एक मै पनि त ह।
रात्रिबसको अँध्यारोमा लेखनाथ भन्दैछन्, 'जेएनयू तनावको बीय रोहित बेमुलामात्र होइन। कट्टर हिन्दुवादी एवं फासिष्ट सरकार यो देशमा अल्पसंख्यक, आदिवासी अनि लेफ्ट एक्टिभिजम सक्ने कूटनीतिमा छ। अलिगढ अनि जामियाइस्लामिया युनिभर्सिटीबाट अल्पसंख्यकहरूले पाउने अधिकार नष्ट गरेदेखि विद्यार्थी आक्रोशित छन्।'
म हाम्रा विद्यार्थीको आन्दोलन सम्झिँदैछु। विमल गुरुङको नेतृत्वमा विद्यार्थीले एउटा आन्दोलन गरे' परीक्षामा चिट सार्न नपाएकोमा। साहित्यिक पुस्तक त परैको कुरा सिलेबससमेत पढ्ने कल्चर मास्ने राजनीतिले निर्माण गरेको समाजमा कविताको काम के हो?
रातिको १ बजे पथलैयामा उत्रिँदा शिशिर र मैले बसमा गरेको बदमासी जाडोले खाइसकेको थियो । मिनरलवाटरको बोतलमा वाटर थिएन, ओल्ड दरबार थियो। तर, त्यसको शक्ति धेरैबेर टिकेन। जाडोले कापिँसकेका थियौं।
गिरिजा, वेद अनि विकास पाण्डे बाइक लिएर आइपुग्दा पीडितले राहत पाएको अनुभव भयो । त्यति राति पनि पसल्नी बज्यैले तातो चिया पिलाइदिएपछि बल्ल काँप्न बन्द भयो। रातभरिको बसयात्रा। हामी तीनको फुस्रा अनुहार र निद्रा हराएको आँखा । उनेरू तीनको बलेको अनुहार र चम्किएको आँखा।
गिरिजाले भने, 'दाइ, यहाँ यसखाले कार्यक्रम अघिबाट भएको छैन । कविता कन्सर्ट लेख्नुपर्ने थिएछ टिकटमा, काम बिग्रियो ।' फन्नी लाग्ने गिरिजाको वाक्यमा पीडा थियो। उनीहरू चाहन्थे, यो बाँझो भूमिमा साहित्य उमार्ने बिज होस् कार्यक्रम।
पाँच सयको टिकट बोकेर जाँदा उनेरलाई सोधिएछ, ‘कविता कन्सर्ट हो?' त्यहाँ पनि दार्जिलिङमा झैं कुनै सांगीतिक कन्सर्टकै माने नै ठूलो हुदो रहेछ।
राजनैतिक ठेकेदारहरूले हाम्रा सपनाको कारोबार फैलाउन थालेदेखि यहाँ कोही पनि युुवा सद्दे छैनन्, बिरामी छन् । तीमध्ये एक म पनि त हुँ।
'त्यसो भए त गाह्रो भएछ', मैले भनेँ।'होइन दाइ, हामीले गर्न खोजेको गाह्रो काम नै हो,' उसले भन्यो, ‘यति जोखिम नउठाई त केही हुदैन।' गिरिजाहरूले उठाएको जोखिम मेरो पनि त हो। सोचेँ, भर्जिन ठाउँमा प्रतिनिधि कविता कसरी सुनाउने होला, केटाहरू आफू त गाह्रोमा परे परे, मलाई पनि भुपारे।
काफरे अमेरिका र केही खरा कविता बोकेको थिएँ। लागेको थियो, प्रतिनिधि कविता सुन्ने श्रोता पनि उस्तै मार्काका होलान्। गम्भीर आग्रहका कविता सुनाउने र वैचारिक संवादको सपना तुहुने स्थितिमा थियो। सिमरामा धेरै लेखकहरू छन्, तर उनीहरूबीच संवादको सेतु छैन।
कार्यक्रमका संयोजनहरू छैनन्। वैचारिक तरङ फैलाउने गरी लेखन शक्ति देखाउने संस्कारको बीउ त झरेकै छैन। छलफलको आग्रह र परिस्थिति छैन। त्यो मौसम छैन। जो छन्, जति छन्, आफ्नै प्रयासले जति हुनुपर्ने त्यतिमात्र छन्। देशमा साहित्यलाई बजारले कानमा समातेर कुदाइरहेको बेला सिमरा केही समयदेखि सुस्ताउनु गिरिजाहरूको निम्ति चिन्ताको विषय थियो नै।
मिडियाले नाम चलेकालाई टिपेर हल्ला गरेको भरमा साहित्यको संवद्र्धन हुने कुरा सिमरा पुगेर पंगु बन्दो हो। यसै पनि दुई देशको सिमाना रहेछ सिमरा।
विदेशी कम्पनी र विचार शीघ्र हाबी हुने र जीविकाको आगोले सुकेको पत्कर भेट्ने ठाउँमा साहित्यिक समाजको निर्माणको सपना पाल्नु पनि ठूलो उपलब्धि हुदोरहेछ । केही गरिरहने मानिसको लागि जति जोखिम उति ऊर्जा। यसकारण गिरिजाहरूले एउटा नारा नै बनाएका रहेछन्, ‘तनाव माने कविता।'
‘बजारमा बस्नुहुन्छ, सधैं व्यस्त रहनुहुन्छ आज जंगल जाऊँ है,' वेद भट्टले बिहान सुनाए। प्रस्ताव नराम्रो थिएन। वेद अनि गिरिजाहरूको सपनामा मलजल गर्नेहरूको सूचीमा दुर्गादल गुल्मका मेजर अच्युत घिमिरेलाई पाउँदा निक्कै अचम्म लाग्यो।
सैनिक, पत्रकार, कवि, गायक अनि मजदुर युनियनका कार्यकर्ताहरू सबै जुटेका रहेछन्। पर्सा वन्यजन्तु आरक्षभित्रको भाटातिर लाग्दा हामी चढेको गाडीले धुलो उडाइरहेको थियो। 'काठमाडौंको प्रदूषणभन्दा स्वस्थ्यकर त यो धुलो हो', नाक थुन्दै मेजर घिमिरेले भने।
गिरिजाले भाटाका वन्यजन्तु, गुल्मले निर्वाह गरिरहेको संरक्षणको दायित्व, जंगलबारे बताए। ‘बनेल त लुप्तप्राय जन्तुु होइन, यसको सिकार गर्दा उस्तो हानी त नहोला नि सर,' गिरिजाले घिमिरेलाई सोधे। घिमिरेले पुलुक्क गिरिजालाई हेरे, मुस्काए अनि भने, ‘बनेल हामीले खाए, लुप्तप्राय बाघले के खान्छ त? '
त्यसपछि हामी सबै हाँस्यौं। जगदम्बा स्टिल मजदुर युनियनका अध्यक्ष, दीपक बिके, सचिव दीपक कार्की अनि सहसचिव विनोद अधिकारी त साथै थिए, 'हुन सक्छ' गीति एल्बमका गायक विकास पाण्डे पनि साथै थिए। लगभग ६० किलोमिटर पर भाटाको मैदान पुगेपछि साथीहरूले झोला खोतले।
निस्कियो, सिक्किमको हनिबी, कुखुराको सितन, ओल्ड दरबार, रुस्लान र भुजा। त्यसैलाई घेरेर वरिपरि बसेको हामीले एकअर्कालाई खुब जिस्कायौं, खुब रमाइलो गर्‍यौं अनि अन्त्यमा विकासको गीतमा रमायौं।
जम्मै तनावको हत्या गर्न यति घटना पर्याप्त थियो। झमक्क साँझमा हामी फर्कंदा बाटामा अचानक हरियो बत्ती झिलिक्क हुने। मैले गिरिजालाई सोधेँ, ‘के बलेको यो? '
'फोटो खिचेको हो,' भन्यो उसले।
'फोटो, यति राती? '
'जंगलमा कति पशु कति छ भनेर जान्न एक प्रकारको मोसन ग्रहण गर्ने क्यामेरा राखिएको हो, जहाँजहाँ क्यामेरा छ, हाम्रो बाइकको आवाज सुनेपछि त्यसले फोटो खिच्छ।'
गिरिजाको बाइक पछिल्तिर रुस्लानले भिजेको मेरो फोटो कस्तो निस्कियो होला?
काठमाडौंबाट अहिले चर्चामा आइरहेकी कवि सुनिता खनाल पनि आइपुगिन्। दार्जिलिङबाट गएर काठमाडौंमा सांगीतिक संघर्ष गरिरहेकी गायिका बानिका प्रधान पनि आइपुगिन्। कार्यक्रमका मुख्य अतिथि कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती आइसकेका थिए।
हेटौंडाबाट कवि यश लामा, प्रमोद अधिकारीहरू पनि आइसकेका थिए। आइसकेको थिएन त केवल मभित्र आँट। श्रोताहरू कति नेता थिए, कति सरकारी अधिकारी, कति कम्पनीका मालिक, विद्यार्थी, साहित्यकार, मजदुर, अनि पत्रकारहरू। अनि म सुनाइरहेको थिएँ, ‘मालिक तिर्खालाई कोकोकोला बनाउँछ÷रहरलाई मल्टिकम्प्लेक्स बनाउँछ÷भोकलाई पिज्जा बनाउँछ÷मलाई मार्न बिख बनाउँछ।'
मलाई कविता सुनाउने आँट ४० जना विद्यार्थीले दिए। मेरा तनावबाट मलाई उनीहरूले नै मुक्त गरिदिए। ती विद्यार्थीहरू जसले कविता प्रतियोगितामा उभिएर जुनजुन कविता सुनाइरहेका थिए, मलाई कविता होइन देशका तमाम संकटहरू सुनाइरहेको झैं लाग्यो।
यति साना विद्यार्थीमा कहीँ पनि अल्लारे प्रेमको आवेग थिएन। स्कुलको सिलेबस छिचोलेर अंक पहुचको भरमा श्रेणी उक्लिएर बा'आमाको ओठमा खुसी फुलाउने बालबालिकालाई यतिधेरै पीडा कसले दिएका हुन्?
देशमा चलिरहेको भ्रष्टाचार, नेतृत्व असफलताको कारण समाजमा आएको आक्रोश, देशको शान्ति चपाउनेहरूको दाह्रा चिन्न उनीहरूको कविता पर्याप्त थियो। कमसेकम कविता उनीहरू देशलाई हेर्ने, राजनीति, समाज, संस्कृतिको प्रवृत्तिलाई हेर्ने अनि मानिस अनुकूलको सत्ता निर्माण हुन नसकेकोमा रोष प्रकट गर्ने आधार थियो।
त्यसपछि निर्धक्कसित कविता सुनाउने वातावरण बन्यो अनि म तनावबाट मुक्त बनें।
कार्यक्रम सकिएपछि विद्यार्थीले घेरे। अटोग्राफ मागे।
मैले सोधें, ‘किन चाहियो अटोग्राफ? '
एक फुुच्चीले जवाफ फर्काई, 'म पनि भविष्यमा तपाईं झैं बलियो कवि बन्न चाहन्छु, त्यसको प्रेरणा यो अटोग्राफले दिन्छ नि।'
आह, त्यो क्षण वास्तवमा नै मेरो निम्ति कठिन थियो।
एकैचोटी मनबाट अनेक प्रश्नहरू निस्किएका थिए। ती जम्मै प्रश्नहरूको केही प्रतिनिधि प्रश्न थियो' ‘देशलाई तनावमुक्त गर्ने माध्यम कविता बन्न सक्ला? यी फुच्चीले कवितामा देखेको शक्ति के हो? किन उसले नेता, सिपाही, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ताहरू बन्ने आम सपनाको विपरीत उभेर कवि बन्ने सपना बुनेकी हुन्?
मेरो देशमा समानता र उपयुक्त समाजका कुरा गर्ने विद्यार्थीलाई एक कट्टरपन्थी राजनैतिक शक्तिको स्वार्थमा देशद्रोही बनाउने चलखेल चलिरहेको बेला यी विद्यार्थीको सपनाको भविष्य कस्तो होला भन्ने चिन्ताले यसै पनि गाँज्यो । फेरि म तनावतिर फर्किएँ, यतिखेर म प्रश्नहरूको युद्धमा घाइते कवि थिएँ।
शिशिरलाई आफन्त भेट्न चितवन जानैपर्ने आमाको आदेशले पिरोलेको रहेछ। चितवन सम्झँदा आउने नाम भूपिन, सरिता तिवारी, अजिता अधिकारी, सुनमराज श्रेष्ठहरूकै हो। भूपिन हामीलाई पर्खिरहेका थिए। सुमन, अजिता र सरितासित फोनमा कुरा भइसकेको थियो।
काठमाडौंको स्ल्याम पोयट्री समूह पनि पुगेको रहेछ। उनीहरूको परफर्मेन्स हामीलाई उस्तो फरक लागेन। यताका कवि राजा पुुनियानी, टीका भाइ, निमा शेर्पाहरूको लाउड एप्रोच र मनोएक्ट लाग्ने कविता सुन्ने बानी छँदैथियो। एउटा कुरा राम्रो के लाग्यो भने जतै गए पनि कवितासित जम्काभेट भयो।
थोरै शब्दले धेरैबेर सोच्न बाध्य पार्ने यश लामाको कविताको मात चितवन पुगेर पनि उत्रिएको थिएन । सिमराको होटेलमा यश लामा, सुनिता खनाल, प्रमोद अधिकारी, म अनि लेखनाथको कविता गोष्ठी भइसकेको थियो। सुनिताको 'ओ नायक' अनि यशको ‘ट्याग' कविता मैले पछिल्लो समयमा सुनेको बलियो कविता थियो।
मैले यशलाई भनेँ, 'पत्रिकाका शनिबारीय परिशिष्टांकमा छाप्नु नि। यति बलियो कविता लुकाएर हुन्न ।' यसको उत्तर सहज थियो, ‘छापिँदैन दाइ, सेलेब्रेटीको सिफारिस चाहिन्छ।' यतिखेर परिशिष्टांकका सम्पादकहरूको अनुहार मेरो अघि थियो, तर यशजस्तो कविदेखि धेरै टाढा।
भूपिनहरूले बनाएको आमा मैले पर्खालमा भेटें। रंगीचंगी दुनियाँबीच ब्ल्याक एन्ड वाइट आमाको चित्र मेरै देशका आमाका विम्ब पनि हो। आमासित फोटो खिच्यौं। बेलुकीको दारुमहलका टपिक अनेक थिए।
'कुमार नगरकोटीलाई घरको याद आयो भने घाट जान्छ रे, पत्याइनसक्नुको झूट कुरा लाग्यो यार,' मैले भनेँ, 'सम्भव नहुने कुरा गरे बूढाले।' भूपिनलाई चाहिँ खुब पत्यार लाग्दोरहेछ। ‘नगरकोटी हामीझैं प्राणी होइनन्', भूपिनलाई लाग्दोरहेछ, 'भाषाको कारिगर भएकैले टिकेका हुन्।'
धेरै लेखक, कविबारे हल्ला गर्ने हामी पनि हामीले भनेजस्तै प्राणी कहाँ थियौं र भूपिन?
सरिता तिवारी अहिले विवादित कवि। एकजना लेखकले जब आफू हिँड्ने बाटो आफैं रोज्छ, खोज्छ र बनाउँछ त्यतिखेरको जीवन जोखिमको हुन्छ। उस्तै लाग्यो, तिवारी पनि। जोखिमको बाटो सहज हदैन, सरितालाई त्यो थाहा छ। हामी जब कविताको राजनीतिबारे बोल्छौं, विचारका विपक्षी आलोचनात्मक बन्नु स्वाभाविक हो। यो लेखको शीर्षक र सरिता तिवारी एकै लाग्यो मलाई।
झारखण्डकी कवि निर्मला पुतुल र चितवनकी सरिता तिवारी एकैएकै लाग्यो जो तमाम प्रश्नहरूको कारखाना शिनाख्त गर्ने मुहिममा जुटेकी छन्। आफैं रेटिने धारमा हरहमेसा टेकेर उभिने यी सरिता तिवारीहरू पनि चालू समाजका प्राणीहरूभन्दा फरक छैनन् र?
भूपिनलाई सोध्न बिर्सेछु, 'सुप्लाको हवाईजहाज चढ्ने प्राणीहरू पनि साँच्चिकै हवाईजहाज चढ्ने प्राणीहरूभन्दा फरक छन्?' नयाँ किताबको नामले नै भूपिन कुन समाजको प्राणी हो भन्ने कुरा बताइरहेको छ।यसपालिको यात्राबाट फर्किँदा हाम्रो पुस्तामा संवादको संस्कार धेरै तीव्र बनिरहेको नेपालबाट फर्किरहेको थिएँ म।
- See more at: http://www.annapurnapost.com/News.aspx/story/42530#sthash.SFZ5Eafz.dpuf
'भाइ, हामेरकोबाट पनि भूल भएको छ।' एउटा गहिरो विषयमा कुरा गरिरहेका छौं। म छु गगण गुरुङको कोठामा। गगण गुरुङ अनेकौं छटपट्टिहरूको हाँगा फैलिएका रूख हुन्, जसको हाँगामा अनेकौं फूलहरू त फुल्छन् तर त्यसलाई सिउरिने शिर छैन। त्यसको महकलाई इन्जोय गर्ने पुस्ता छैन। त्यसपछि त्यत्तिकै ती फूलहरू मुर्झाइदिन्छन्। फेरि पनि विशाल अम्बरमा हराउने नाम त गगण गुरुङ कै हो।
'हाम्रा ठालुहरू भनेका को हन् ? कविमा अगमसिंह गिरी, आख्यानकार र लेखनमा आन्दोलन गर्ने इन्द्रबहादुर राई, संगीतमा अम्बर गुरुङ, नाटकमा मनबहादुर मुखिया', गगण गुरुङलाई त्यति ध्यानले अरू कसैले सुनेका छन्, छैनन्, म जान्दिनँ।
मलाई भने यसरी तानिरहेको छ, मानौं म कतै हराइरहेको छु। वास्तवमा इतिहासको त्यो गहिरोमा जहाँ पस्ने सौभाग्य धेरैसित छैन, गगण गफ जारी छ, 'यी महारथीहरूबाट नै भूल भएको छ अरूको के कुरा गर्ने ? '
इन्द्रबहादुर राईको 'आज रमिता छ'मा दार्जिजिङ घर भएको जनक ससुराली नेपालबाट फर्किंदा एक ठाउँ भन्छन्, 'हामी त पस्यौं पस्यौं स्वदेश छोडेर, त्यो मुजुर पनि हामीसितै मुग्लान पस्न लागेको...खेदेरै पनि फेरि नेपालभित्रै हालिराखेको...हामी मान्छे त प्रवास पस्यौं पस्यौं, बनको पशुपक्षीले पनि यसरी स्वदेश छोड्न थाले कतिदिन रहन्छ नेपाल ? '
इतिहासकारले के पढायो भने इस्ट इन्डिया कम्पनीले ३१ दिसेम्बर १६०० देखि भारत देशको माटोमा प्रथम पाइला टेक्यो रे। इतिहासकार पनि यति गहिरोरूपले अल्झिदिएपछि त्यही इतिहास पढेर हुर्किएको संघीय भारतले (केन्द्र) बोक्ने मानसिकता के हुन्छ? वास्तवमा इतिहासकारले ब्रिटिसहरू आएको भारतीय उपमहाद्वीपमा भन्दिनुपर्ने।
किनभने भारतीय उपमहाद्वीप देश होइन, क्षेत्र हो। भारत देश त २६ जनवरी १९५० देखि बनिएको हो। ब्रिटिस भारतमा जहाँ-जहाँ जो-जो थिए, अहिलेको संघीय भारत निर्माणपछि मानचित्रले बाँधेका जति उनीहरू स्वतः भारतीय बने। त्यस अर्थमा भारतीय नेपाली नागरिकहरू अनुप्रवेशकारी होइनन्।
इन्द्रबहादुर राईको जनक पनि भारतीय नागरिक नै हुन्। यो त पक्का हो, संघीय भारतअघि र पछि पनि नेपालबाट भारत छिर्ने बाटो खुला थियो। १९५० को सन्धिको धारा ७ र ८ एउटा गतिलो नमुना हो।
जनकको मानसिक मानिस द्विचरित्रको छ, एउटाले आफ्नो देश 'नेपाल' बुझ्छ र इतिहासको नोस्टाल्जियामा अल्झिन्छ, अर्कोले नेपालबाटै मुग्लान पसे नी संघीय भारतको निर्माणपछि अब हाम्रो देश भनेको 'भारत' नै हो भन्छ। किनभने यो उपन्यास आउँदा संघीय भारतको उमेर १० वर्षको थियो।
वास्तवमा यो जनक इन्द्रबहादुर राई आफैं हुन्। जोसित १० वर्षको अवधिसम्म पनि इतिहासको नोस्टालजिया उत्तिकै थियो। संघीय भारतमा दार्जिलिङका नेपालीहरू पसिसकेको बुझ्ने बुद्धि उतिसारो विकसित नै भइसकेको थिएन। ऊ भारतीय भइसकेको थियो तर उसलाई आफ्नो देश 'नेपाल'नै लाग्थ्यो।
कवि मनप्रसाद सुब्बा लेखकको यो इतिहासबोधी भ्रमको स्रोत स्वच्छन्दवादी धाराको प्रभावमा देख्छन्। नाटककार सीके श्रेष्ठ चाहिँ राजनैतिकरूपले असचेत ज्ञानीहरूलाई पढाइएको गलत इतिहास भन्छन्।
अगमसिंह गिरीको गीत कम्पोज भइसकेको थियो। अम्बर गुरुङले कपिलराज सुब्बाको सुझावमा गीत तयार पारिसकेका थिए। पहिलोपल्ट यो गीत गाइँदै थियो। गायक थिए-गगण गुरुङ। कला मन्दिरका एकजना बंगाली थिए आलोक घोष, उनी सधैं भनिरहन्थे, द किङ इज कन्फ्युज विटविन अम्बर गुरुङ एन्ड गगण गुरुङ।
नत्र मनबहादुर मुखियाले 'अनि देउराली रुन्छ'मा नेपालको माटो बोकेर भारत आएको देखाउँदैनथिए। आखिर किन यी कलाकारहरूलाई नेपाल मोह थियो ? किन घरको माया बिर्सेर नेपालीहरू भारत पसेका हुन् अनि भारत आएर नेपालको मायाले तड्पेका हुन्?
घरको माया बिर्सनेहरू फर्किए फर्किएनन्, अम्बर गुरुङ भने फर्किए।
इतिहासकार कुमार प्रधानलाई लाग्थ्यो, 'कवि अगमसिंह गिरीको दुःखवादको जरा भेटिँदैन।'मलाई के भनेको होला, लाग्थ्यो। पढ्दैजाँदा गिरीमा पनि इन्द्रबहादुरीय भ्रम उस्तै देखियो। किनभने गिरी पनि कोहीबेला नेपाललाई 'आमा' भन्दिन्थे, 'मेरो देश' भन्दिन्थे र भारतलाई प्रवास। हरिभक्त कटुवालले त प्रवासी नै झुन्डाएका थिए।
नेपाल मोह र भारतबासबीच खजमजिएको चेतना भारतीय नेपाली साहित्य र संगीतमा पनि उस्तै दह्रो गरी आयो। अगमसिंह गिरीको 'नौ लाख तारा'को 'सुनको सपना आँसुमा किन पो बाँधिल्यायौ नीर घरको माया बिर्सेर किन पो यहाँ आयौ नि'को 'घरको माया' यतिखेर हो भने धेरै विवादित कुरा हो।
अम्बर गुरुङको निम्ति यही गीत नेपाल पस्ने बाटो थियो। अम्बर गुरुङबारे खोतल्न पुगेको म हाम्रा अग्रजहरूको नेपाल मोह, इतिहास र भारतीय नेपालीहरूको चिनारीको सवालबीच अल्मलिरहेँ।
गगण गुरुङलाई सुनेपछि थाहा भयो, त्यतिखेर दार्जिलिङ आइबस्ने नेपाली राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले पनि दार्जिजिङका नेपालीहरूलाई आफ्नै प्रजा मान्थे। गगण गुरुङसित यसको ऐतिहासिक कथा रहेछ।
गगण गुरुङहरूलाई माउन्ट एभरेस्ट होटेलमा बोलाइयो। राजा महेन्द्रलाई मनोरञ्जन दिइनुपर्ने। अगमसिंह गिरीको गीत कम्पोज भइसकेको थियो। तामाङ सेलो बिटमा। भीमपलासी रागमा।
अम्बर गुरुङले कपिलराज सुब्बाको सुझावमा गीत तयार पारिसकेका थिए। पहिलोपल्ट यो गीत गाइँदै थियो। त्यो पनि उद्घाटनी गीतको रूपमा। गायक थिए- गगण गुरुङ। राजा यति मक्ख परे कि, फर्माइस नै भयो। त्यसपछि अम्बरलाई नेपाल बोलाइयो।
'घरको माया बिर्सेर...भाइ, यो गीत छ नि, यसको गहिराइ सबैलाई थाहा छैन। राजाले 'घरको माया बिर्सेर' आएका अम्बरलाई 'घर' फर्काएका हुन्। यो गीत भारतीय नेपालीहरूलाई विदेशी बनाउन पर्याप्त पुग्ने गीत भएपनि अम्बरलाई देश फर्काउने गीत बन्यो। यतिखेर खुसी हुनु कि दुखी ? ' (गगण गुरुङको यो वाक्यले को रन्थनिँदैनन् र ? )
अम्बर गुरुङ सिकिस्त हुँदा फेसबुकमा खैलाबैला मच्चियो। नेपालतिरबाट अनेकौं 'धारणा'का स्टाटसहरू देखिए। स्टाटसहरू पढ्दा लाग्थ्यो, उता नेपालको राष्ट्रिय गीतको धुन भर्ने राष्ट्रिय संगीतकारलाई नेपाल सरकारले दुत्कारिरहेको छ। यता भारतीय नेपालीहरूलाई चिलाई न कनाई।
यो बेला आखिर अम्बर कसका हुन् ? भारत कि नेपाल ? यो प्रश्न गर्नु जति मुर्खता हुन्छ, उत्तर दिनु त्योभन्दा बढ्ता मुर्खता हुन्छ। कलालाई राजनीतिक सिमानाले छेक्दैन। भूगोलले छेक्दैन। इतिहासले छेक्दैन। साँच्ची नै हो कि ?
अम्बर आफ्नो सांगीतिक चेतना अँट्ने स्पेसको खोजीमा थिए। उनलाई त्यो स्पेस 'नेपालमा छ' लाग्थ्यो। त्यो स्पेस नेपालका राजाले उपलब्ध गराइदिए। यसोभन्दा पनि हुन्छ- राजाले होइन, अगमसिंह गिरीले उपलब्ध गरिदिए।
अगमसिंह गिरीले होइन 'घरको माया बिर्सेर' भारतमा दुःख गरिरहेका नेपालीहरूको सामाजिकताले उपलब्ध गरिदियो। कि भारतीय नेपालीहरूको नेपालमुखी मनोविज्ञानले ? भाषा उतैबाट बोकिल्याएका, संस्कृति, मनोविज्ञान, चेतना सबै उतैबाट बोकिल्याएका तत्कालीन भारतीय नेपाली सामाजिकतालाई केलाइदिने हो भने यी कुराहरू नितान्तै स्वाभाविक लाग्छ।
जब राजनीतिक सवाल उठ्छ, यही कुरा खतरनाक बनिदिन्छ। भाषिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक अन्तरविरोधहरूले तयार पारेको समाजमा स्वच्छन्दवादी लेखकहरूको हालिमुहाली रहेको बेला अम्बर र अगम अल्मलिनु ठूलो कुरै भएन।के थियो, यता नौलाख तारामा मिसा (कानुन) लाग्यो, उता अम्बरलाई नेपाल पस्ने भिसा लाग्यो।
अम्बर गुरुङको सवालमा, एकादेशका राजाले दार्जिजिङका संगीतकारलाई गरेको प्रेमभित्र अनेकौं अरू सत्यहरू लुकेका छन् जसको खोजी आजसम्म भइरहेको छैन। जुन सत्य उदांगो हुँदा भारतीय नेपालीहरूको चिनारीको प्रश्नलाई संकटमा पारिदिन्छ।
यसकारण अम्बरबारे बोल्दा निक्कै जोगिएर बोल्नुपर्ने 'बाध्यता' भारतीय नागरिक नेपालीहरूलाई छ। त्यो बाध्यताको एब्ट्रयाक्ट सौन्दर्य गिरीले अम्बर गुरुङलाई लेखेको चिठीभित्र पनि छ, गीतहरूमा पनि ठम्याउनुपर्ने, मिहिन रूपले अनुभूत गर्नुपर्ने रूपमा।
अम्बरलाई पनि नेपाल पस्न यस्तो के 'बाध्यता' थियो, जसबारे ठीकठीक किटान गरेर भन्न सकिन्न। यसलाई मौन बसेर, केवल अनुभूत गरेर बुझ्न सकिन्छ। शब्दमा व्यक्त गर्न सकिन्न। शब्दले त्यो बाध्यता र पीडालाई ठीक-ठीकसित भन्दिन सक्दैन।
मैले गरेको अनुभूति चाहिँ 'कहाँ गए ती दिनहरू' अम्बरका आधा अनुहार हो। दार्जिजिङको संगीत, साहित्यिक र राजनैतिक संघर्षबीच उभिएको अम्बर कस्ता थिए होलान्, मभित्र यस्तो विचार आउँछ।
अम्बरले दार्जिजिङमा हिँडेका अप्ठ्यारा बाटो, सजिलो बाटो, जुन बाटो भएर उनी बिदेसिए, त्यसबारे जान्ने रहरको तिर्खा हरहर छ। जब पनि 'कहाँ गए ती दिनहरू' पल्टाउँछु, त्यहाँ 'नौ लाख तारा'भन्दा चहकिलो 'सुनको तारा' चम्किन्छ। हल्ला के छ भने अम्बर सुनको तारा झारेकोले होइन नौ लाख तारा गनेकोले नेपाल पसेका हुन् रे।
त्यतिखेर भारतीय नेपालीहरू नौ लाख नै थिए थिएनन्, मैले अनुसन्धान गरेको छैन। तर 'सुनको तारा' झार्ने सपना बाँड्ने रोमान्सेहरूको संख्या धेरै थियो। तर अहिले सुनको तारा झार्ने केटोलाई तरुनीहरूले पत्याउँदैनन्।
फेरि पनि अम्बर यही गीतले अजम्बरी हुनु क्या मीठो सपना हो। क्या मीठो विपना हो। क्या मीठो भ्रम हो। क्या मीठो यथार्थ हो। समर्थ कलाकारले मात्र समयलाई आफ्नो अधिनमा राख्न सक्छन्। अम्बर त्यही कलाकार हुन्। नेपालका कलाकार। होइन, विश्वका कलाकार। जसलाई भूगोलले छेक्दैन। राजनीतिले छेक्दैन। इतिहासले छेक्दैन।
अहो, तर मानौं, अम्बर कुनै पनि देश पुगे रे, तर फर्किने ठाउँ कुन हुन्छ ? उनले प्रतिनिधित्व गरिरहेको देश कुन हुन्छ ? त्यसको उत्तर अगमसिंह गिरीसित रहेछ। भन्छन् गिरी, '...त्यसबेला ऊ हाम्रो दार्जिजिङे अम्बर नभएर नेपालको अम्बर भएको हुनेछ।'
दार्जिजिङबाट नेपाल जाँदा सिनामाले, इतिहासले, भूगोलले नछेक्ने अम्बरलाई नेपालबाट अरू देश जाँदा छेक्छ कि छेक्दैन हँ ? - हैट, किन मलाई यस्तो ज्यानमारा प्रश्नले यसरी टोक्छ ?
मैले सहज रूपमा हेर्ने र भन्ने हो भने, अम्बर त गिरीले 'नजाऊ फर्की नेपाल उठेर भन्छ देउराली' र 'फर्केर हेर मुङ्लानको मायालु पाखा चियाबारी' भन्दा पनि नटेर्ने कलाकार हुन्। वास्तवमा आफ्नो देश छोडेर भाग्ने संगीतकार हुन् अम्बर।
भारतमा नै अन्य भाषीहरूसित बसेर भारतीय नेपाली संगीतको उचाइ निर्माण गर्ने स्पेस यहीँ थियो जसको खोज गर्न सक्ने पुस्तामात्र थिएनन्। पश्चिम बंगालमा बसेर रवीन्द्रनाथ ठाकुरले बंगलादेशको राष्ट्रिय गीत लेख्न सक्थे। अफसोस् अम्बरको हकमा त्यो परिस्थिति बनेन।
वास्तवमा त्यो परिस्थिति आज पनि छैन। आज पनि कैयन मनोज बोगटी, बानिका प्रधान, पुष्पण प्रधानहरू त्यतै फर्किरहेका छन्। उनीहरूको छातीको ट्याग भने भारतीय नै छन् तर।
हुन त अम्बरको समयमा नेपाललाई 'विदेश' देख्ने चेतना नै थिएन। न गिरीमा थियो, न अम्बरमा, न इन्द्रबहादुर, न मनबहादुर मुखियामा। किनभने उतिखेर भारतीय नेपालीहरूको चिनारीको सवाललाई राजनैतिकरूपले सम्बोधन गर्ने वातावरण नै साहित्यले निर्माण गरेन। राजनैतिक संगठनहरूले भर्खरभर्खर संघीय भारतको चरित्र खेप्दै थियो।
दार्जिजिङका अम्बर नेपाली नागरिक हुन्। यो क्या मज्जाको कुरा हो। किनभने अम्बर गुरुङ यस्तो चेतनाका टिपिकल उदाहरण हुन्, जुन चेतनाले 'नेपाललाई आफ्नो देश ठान्ने समय दार्जिजिङमा थियो' भन्ने कुरा बुझ्न पर्याप्त हुन्छ। यो भयानक कटु यथार्थ थियो।
यस्तो चेतना यतामात्र होइन उताका सित पनि रहेछन्।नेपालका कविहरू कालेबुङ आएका थिए। फर्किएर गएपछि कवि सीमा आभासले एउटा संस्मरण लेखिन्। भनिन्, 'टिष्टा देखेपछि धेरै भावुक भएँ।' मैले सोधेको थिएँ, 'किन हौ, त्यति सारो त...? '
भन्थिन्, 'राष्ट्रिय गीतमा बारम्बार गाएको हाम्रो 'टिष्टा' आफ्नै आँखाले देखेँ नि त।'अन्त, अम्बरलाई नेपाल आफ्नो देश लाग्नु कुन ठूलो कुरा भयो र ?
फेसबुकमा अम्बर गुरुङबारे अनेकौं कुरा आएपछि मलाई उनीबारे जान्न मन लाग्यो। मलाई भने उनीबारे केही थाहा छैन।
केही चर्चित गीत सुनेको छु, जस्तो- नौलाख तारा, सुनको तारा। साथी झुमा लिम्बूले दिएको अम्बर संगीत चाहिँ सुनेको छु। साथीहरूलाई सोधेँ। उनीबारे जान्नु हो भने गायिका शान्ति ठटाललाई भेट्दा हुन्छ भन्ने थाहा पाएँ। म दार्जिजिङ पुगेँ।
शान्ति गुरुमा आँखाको जाँच गराउन नेपाल छिरेकी थिइन्, मणिकमल छेत्रीसित। साथीहरूसित बेलुकी दारु महल पसेको बेला मनको कुरा झिकेँ। एकजनाले गगण गुरुङको नाम लिए। अम्बर गुरुङसितै धेरै काम गरेका वरिष्ठ संगीतकार गगण गुरुङ। अम्बर कथाका राम्रो न्यारेटर पनि हुन् गगण, नेपाली संगीत कथाका पनि।
१९५२ मा आर्ट एकाडेमीमा अम्बर अध्यक्ष हुँदा गगण महासचिव थिए। दलसिंह गहतराज, शिव सिंहहरूपछिको पुस्तामा अम्बर, गगण, शेखर दीक्षित, रहरकुमारी राई, पासाङ वाङ्बलहरू थिए। उतिखेर अम्बरका गायकहरूमा गगण पनि एक।
'हो भाइ, इन्द्रबबहादुर राईको उपन्यास, गिरीको नौ लाख तारा, जो अम्बरले गाए, यी कुरा अहिले हामीलाई विदेशी बनाउन पर्याप्त हुन्छ। धन्न ठालुहरूका यी डोकुमेन्ट्सलाई हाम्रो विरुद्ध उभ्याउने चेतना हाम्रा विरोधीहरूसित छैन र पो...,' उनी भनिरहेका थिए। म चिउँव भइरहेको थिएँ।
मैले गगण गुरुङलाई जिज्ञासा राखेँ, 'राजालाई गीत सुनाउने तपाईं, बोलावट चैं अम्बरलाई पो भएछ त है ? 'गगण गुरुङ हाँसे। उनले आफैंले केही भनेनन्। अरूकै कुराबाट उत्तर दिए।
'कला मन्दिरका एकजना बंगाली थिए आलोक घोष, उनले सधैं भनिरहन्थे, द किङ इज कन्फ्युज विटविन अम्बर गुरुङ एन्ड गगण गुरुङ।' भनिसकेर उनी जोडले हाँसे। त्यसपछि पो अम्बर चासो ह्वात्तै बढ्यो मभित्र।
बिपि बढ़ाउने बिपि
सन्तजर्ज स्कूलमा ‘बिपि’ चलिरहेको थियो। हेर्दाहेर्दै मुख्य अतिथि फुत्त बाहिर हानिए। त्यसपछि बजारमा हल्ला चल्यो; मुख्य अतिथिले भनेछन्‌, ‘‘सन्तजर्जका फादरले हामीलाई होच्याउन बोलाएका हुन्‌?’’
मुख्य अतिथि थिए गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता दावा पाखरिन्‌।
कालेबुङको रामकृष्ण रङ्गमञ्चमा कार्यक्रम थियो। पाला थिए उद्घोषक। तिनले मुख्यअतिथिलाई मञ्चमा बोलाए। मुख्यअतिथिले उद्घोषकको हातको माइक ताने र भने, ‘‘यिनी हाम्रा दुश्मन हुन्‌।’’
मुख्य अतिथि थिए गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका नेता सीके प्रधान।
त्यो नाटकको नाम थियो ‘भानु र पाला’, छोटोमा ‘बिपि’। वास्तवमा यो नाम ठिक थियो। किन भने यही नामले तत्कालीन नेताहरूको बिपि बढ़ाउँथ्यो। अर्थात व्लडप्रेसर।
ललित गोले। धेरैले तिनको यो नाम जान्दैनन्‌। उनीहरू उनलाई देखेपछि ‘पाला पो रहेछन्‌’ भन्छन्‌। संसारमा यस्ता लेखक वा कलाकार कमै छन्‌, जसलाई आफ्ना पात्रको नामले चिनुन्‌। ‘‘म ललित गोले भन्दा धेरै चर्चित पाला नामले नै चिनिन्छु,’ भन्छन्‌ भानु र पालाका निर्देशक, लेखक अनि कलाकार ललित गोले, ‘‘जीवनभरिको लागि कमाएको सम्पति यत्ति हो मेरो।’’ धेरै नाटक खेलेका छन्‌, लेखेका छन्‌, निर्देशन गरेका छन्‌ तर प्रशिद्धि एउटै नाटकले दिलायो उनलाई, त्यो पनि बिपि अर्थात व्लडप्रेसर बढ़ाउने नाटकले। अर्थात भानु र पालाले। अर्थात बिपिले।
एकदिन यसै बसिरहँदा उनको मनमा यस्तो प्रश्न उठेछ,- ‘हाम्रो जमानामा भानुभक्त जन्मिएको भए के बन्थे होलान्‌?’ वास्तवमा तिनलाई आजका मानिसमा राजनीतिले पारेको प्रभावलाई अभिव्यक्त गर्नु थियो। त्यो प्रश्नको उत्तर पनि तिनलाई तिनकै मनले दियो, ‘भानुभक्त जन्मिएको भए के हुन्थे र, पार्टीको कन्भेनर हुन्थे नी।’
त्यसपछि उनले हिसाब निकाले-
दुई सयवर्ष अघि भानुभक्तले घॉंसी भेटे, प्रेरणा पाए अनि कवि बने।
दुइसयवर्ष पछि भानुभक्तले घॉंसी भेटे, रिसाए र पालाकोमा रक्सी पिए।
बस बनियो नाटकको खाका। खासमा वैचारिक सङ्‌कट देखाउन भानुभक्तलाई आजको समयमा जन्माउन अनिवार्य थियो। कवि र रक्सीबीच नाटकले आफ्नो अर्थ बोक्छ। राजकुमार हिरानीलाई संसारमा व्याप्त धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विसङ्‌गति खोतल्न पृथ्वीमा एलियन झिकाउन परेको थियो पीके फिल्ममा। ललित गोलेलाई दार्जीलिङको राजनैतिक विसङ्‌गति खोतल्न नेपालका भानुभक्त दार्जीलिङ झिकाउन परेको थियो बिपि नाटकमा।
घरि कसैको घर सल्किन्थ्यो। घरि कसैको गाड़ी भत्किन्थ्यो। सरकारी सम्पतिहरू जलेर खाक। जङ्‌गलतिर धेरैको छः इञ्च घटिरहेको थियो। किन भने समय 86 को थियो। अर्थात समय सुवास घिसिङको थियो। अर्थात गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको। जनता राजनैतिक बुटमुनि थिए। मानिसका संवेदना कैद थियो। आवाज थुनिएको थियो। विवेक थुनिएको थियो। विचार थुनिएको थियो। जीवन थुनिएको थियो। समाजमा श्मशानको शान्ति थियो। मानिसहरू बोल्थे तर साउतीमा। छेवैमा कुटपिट हुन्थ्यो, मानिसले हेर्थे तर देख्दैन थिए। अत्याचार चर्को थियो। दमन पिरो थियो। सत्ताले हेप्थ्यो मानिसलाई। संविधानमा नै चेप्टिएर मरिसकेको थियो अभिव्यक्तिको अधिकार। 1947 मा नै मरिसकेको थियो स्वाधिनता।
यस्तोमा बोल्नु, हतियारको धारमा टेक्नुथियो। यस्तोमा आवाज उठाउनु आत्महत्या गर्नु थियो। मानिसको चेतनामा आवाजको ठाउँमा भय खॉंदिएको थियो। विद्रोहको ठाउँमा लाश राखिएको थियो।
ललित गोलेलाई लाग्यो, सधैँभरि बोलिराखेर जिउनुपर्ने मान्छे नबोलेरै मरिरहेका छन्‌। आम मानिस त मुर्दा थिए नै कलाकारहरूपनि आफैभित्र कैद थिए। गोलेले निष्कर्ष निकाले, ‘‘हेपिएर, होचिएर बस्नु मान्छेको गुण होइन, मौन समाज लाशजस्तो हो। मौनता तोड्‌न केही त गर्नैपर्छ।’’
1993। भानु र पाला पहिले ललित गोलेको दिमागमा आयो। त्यसपछि मञ्चमा। समाजको मौनतासे खासमा ललित गोलेको व्लडप्रेसर बढ़ायो। त्यो बिपिलाई मञ्चमा भानु र पाला बनाएर उतारे। त्यसपछि सत्तासिन नेताहरूको बिपि बढ्‌न थाल्यो।
आध्यात्मिक र साहित्यिक दुवै एकसाथ रहेका कृष्णसिंह मोक्तानले रामकृष्ण रङ्‌गमञ्चबाट बाहिएपछि भनेछन्‌, ‘जनताको मौनता तोड्‌ने नाटक पनि बनिँदोरहेछ त।’ तत्कालीन कठिन समयको लागि मोक्तानको यो वाक्य नितान्तै दुर्लभ वाक्य थियो। नाटक हेरेपछि दार्जीलिङका मानिसहरूले नाटकको क्यासेट लगे। च्यानलतिर देखाउन। तर कहिल्यै देखाएन। एउटा कम्पनीले भानु र पाला-2, भटाभट बजारमा निकाल्योे, चोरेर। गाह्रो समयमा मानिसहरू लुकिलुकि हेर्न थालिसकेका थिए। कस्तो थियो भने, सीडी जसको हात लाग्थ्यो, उ सङ्‌केतमा बोल्थ्यो। टिभीसेटमा बसेर नाटक हेर्नको लागि भनिन्थ्यो,..‘भरे ...9 बजी रमेशको घरमा...’ सुन्नेले बुझ्थे कि भानु र पाला हेर्नको निम्ति हो यो सङ्‌केत। मानौँ पट्ठो जवानहरू लुकीलुकी निलो चक्का हेरिरहेका छन्‌।
यसरी लुकेर हेर्ने नाटक हो-भानु र पाला।
कालेबुङ, सिलगढ़ीतिर नाटक भाइरल हुँदा पनि दार्जीलिङ लगिएका सिडी टिभीतिर देखाइएन।
‘‘अहिलेे सम्झिँदा दार्जीलिङ कालेबुङभन्दा धेरै डराउँथेछजस्तो लाग्छ,’’ गोलेलाई लागेको रहेछ, ‘‘सत्ताकेन्द्र थियो जो।’’
दार्जीलिङमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको दबदबामा आएको थियो भानु र पाला-1। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा आइसक्दा भानु र पाला-2 पनि आइसकेको थियो। यो नाटकले देखेको सपना थियो-अभिव्यक्तिको अधिकारलाई मानिसले प्रयोग गरुन्‌। क्रुर सत्ताको हालिमुहालिविरुद्ध मानिस बोलुन्‌। राजनैतिक दमनको विरुद्ध मुट्ठी उठाउन्‌। संयोग कस्तो थियो भने सुवास घिसिङको विरुद्ध विमल गुरूङ आइसकेका थिए। यता समाजको मौनताको विरुद्ध आइसकेको थियो भानु र पाला। उता राजनीतिले समाजको मौनता तोड्‌दै थियो, यता नाटकले मानिसको मौनता।
उता विमल गुरूङ सफल बने यता ललित गोले। वास्तवमा भानु र पाला समयसितै हिँड्‌ने विचार थियो। यसकारण यसौ महिनादेखि ‘भानु र पाला-3’ आइरहेको छ। उता सुबास घिसिङको ठाउँमा फेरि बिमल गुरूङ आएका छन्‌। फेरि समय उस्तै छ। मानिसको सपना कैद छन्‌। जनताको अधिकार थुनामा परेको छ।
‘‘भानु र पाला-2 ले गोरामुमोका नेताहरूको बिपि बढ़ाएको थियो,’’ मैले ललित गोले उर्फ पालालाई सोधेँ, ‘‘भानु र पाला-3 ले गोजमुमो नेताहरूको बिपि बढ़ाउँछ?’’
उनी खिस्स हॉंसे। एकछिन सोचे। भने, ‘‘त्यो थाहा पाउन त नाटक नै हेर्नुहोस्‌ न।’
भानु र पाला-2-ले 21 वर्षको मौनता तोड्‌ने कलात्मक भूमिका निभाएको थियो। अहिलेको सत्ताको उमेर त कलिलै छ। घिसिङको बेला मानिसले बोल्न नपाउने स्थिति थियो। विमलको पालामा मानिसले बोल्न पाउने स्थिति छ। भानु र पाला-3-को मत्थुले भन्छ, ‘‘पाला पनि भोटमा उठ्‌नू...माटोको लागि।’’
पालाले जवाब दिन्छ, ‘‘तिम्रो लागि पाला बोल्नु सधैँभरि? पाला मरेपछि को बोलिदिन्छ?’’
मत्थुले उत्तर दिन्छ, ‘‘पहिला बोल्नु पाउँदैनथियो। अहिले सप्पैले बोल्नु पाउँछ, तर पाला भन त, बोल्नु पाउने ठाउँमा को चॉंहि बोलेको छ?’’
‘‘भानु र पाला-3, बोल्नु पाउने ठाउँमा नबोल्ने मानिसको जीवन हो,’’ गोलेको निष्कर्ष छ।
भानुभक्तले घॉंसी भेटेको थिए। यहॉं पाला भेट्‌छन्‌। नाटकमा ‘पाला’-को चरित्रसित धेरै ‘नाखुश’ भएछन्‌। पालालाई गलतरूपले देखाइएको आरोप पनि आएछ। तर गोलेलाई नाटकमा मामुली मानिस देखाउनुथियो। मामुली मानिसभित्रको विद्रोह देखाउनु थियो। नाटकले दिने सौन्दर्य पालाको चरित्रले नै बोक्थ्यो।
‘‘गोर्खालाई वीर भनिन्छ,’’ गोलेले पालाबारेमा सुनाए, ‘‘21 वर्ष मौन बस्ने, अन्याय सहने कसरी वीर हुन सक्छ?’’
उनलाई लागेको छ, पाला त मामुली मानिस हुन्‌। यस्ता मामुली मानिसभित्र पनि बिद्रोह थियो। उसले पनि अन्याय सहेको थियो। उभित्र पनि आक्रोस थियो।
‘‘जब वीर गोर्खा बोल्दैन थियो, तब पाला बोल्यो। जब पाला बोल्यो, उ वीर गोर्खाभन्दा कता हो कता वीर भयो नी,’’ बिट मारे गोलेले ‘‘पाला अल्पसंख्यकहरूको आवाज हो। आवाजको विम्ब हो। मेटाफर हो। नबोल्ने बहुसंख्यक गोर्खा वीरको सामु बोल्ने अल्पसंख्यक पाला बोल्नु, जति नै ठूलो र बलियो सत्ता भए पनि आफ्नो अधिकारको निम्ति त्यसविरुद्ध बोल्नुपर्छ भन्ने सङ्‌केत दिनु हो।’’
गोलेले स्वीकारे भानु र पाला-2-ले त नेताहरूको व्लडप्रेसर धेरै बढ़ाएकै हो। हेर्नु यो छ कि ‘बिपि-3’ ले कसको कति ‘बिपि’ बढ़ॉंदोरहेछ। नाटकको सफलता आखिर अर्थात ‘व्लडप्रेसर’-मा नै त छ।
कवितामा आजका पुस्ता
समकालीन लेखनका दुई धार
कवि राजा पुनियानीले फेसबुकमा एक स्टाटस टॉंसे, सोधिएको थियो ‘भारतीय नेपाली कविताको मूल स्वर के हो?’
राजाले पछिबाट एउटा निबन्ध नै लेखेर भारतीय नेपाली कविताको मूल स्वर स्पष्ट नभइहालेको र कविताको मूल स्वर ‘ल्याब’-मा नै रहेको खतरनाक निष्कर्ष दिए। त्यतिभन्दा भन्दै पनि राजाको सर्वेक्षणले युवा कविहरूको एउटा ठूलो समूह भारतीय नेपाली समाजलाई केन्द्रमा राखेर सामुहिक प्रतिबद्धतासित लेखनमा आइसकेको अनि उनीहरूको राजनैतिक आग्रह चर्को बन्दै गइरहेको पनि खुलाएको थियो। कवि टीका भाइको ‘जातीय मुक्ति सङ्‌घर्षको सयवर्ष’-(इतिहासको पुस्तक)ले जनसङ्‌घर्ष र आत्मनिर्णयको प्रसवबारे धेरै कुरा भनिसक्दा पनि साहित्य भने विविध प्रयोग, शिल्प र मध्यममार्गी खेलहरूसित एकप्रकारको अनुत्पादक र बेकार वस्तुकोरूपमा समाजमा पुगिरहेको देख्ने चेतना कमै छ। लाग्छ, भारतीय नेपाली कविता दुई बाटोमा छ। एउटा बाटोबाट जानेहरू भन्छन्‌, ‘कविता शुद्ध कलात्मक कुरा हो, यसलाई यसरी नै अघि लैजानुपर्छ।’ अर्को बाटो जानेहरू भन्छन्‌, काव्यिक कला समाजको पक्षमा बोल्ने स्वरको माध्यम बन्नुपर्छ।’ उत्तराधुनिकतावादी विचारलाई लेखनको आदर्श बनाइरहेका कविहरूको निम्ति काव्यकर्म कलाखेल मात्र छ।
सिक्किमको एक कार्यक्रममा बोल्दै आलोचक जय क्याक्टसले चलिरहेका लेखनहरूलाई ‘परिचय सङ्‌कट’-को उपज बताए। यद्धपि यसबारे खुलेर कतै बहस भइरहेको छैन। तिनी भन्छन्‌, कवितालाई कवितै रहनुदिनुपर्छ, यसलाई विचार र सिद्धान्तको भारी बोकाउनु हुँदैन। यद्धपि तिनी विचलन लेखनका सदस्य हुन्‌। विचलनले साहित्यमा उत्तराधुनिकतावादी एप्रोजकै वकालत गर्‍यो। संरचना, शैली, विम्वलाई प्रमुखता दिने अनि विचारलाई ‘विश्वचेतना’ मा जोड्‌ने आग्रहको विचलन पत्रिका अहिले निरन्तर छैन। गिरीकालीन जातिवोधी र दुःखवादी चेतना नितान्तै क्षेत्रीय(भारतीय नेपाली) थियो। आयामेलीहरूले नितान्तै ‘लोकल’ वस्तु माने। लोकलथोक लेखेर विश्व साहित्यमा नेपालीको उपस्थिति दह्रो हुँदैन भन्ठान्थे आयामेलीहरू। धर्णिधर कोइराला, सुर्यविक्रम ज्ञवालीहरूले पुकार्ने आमा (नेपाल) आफ्नो होइन भनेर चिन्न समय लागे पनि गिरीकालमा भारतमा आफ्नो अवस्थान खोज्ने चेतमार्का पुस्ता हुर्किरहेको थियो। भारत स्वाधिन भएपछि पनि भारतीय नेपालीहरूको पहिचानको सङ्‌कट सम्बोधनमा नआउनु, स्वतन्त्रता सङ्‌ग्राममा भने होमिनु अनि विभिन्न राज्यहरूमा सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक दमनमा पर्नु गिरीकालीन दुःखवाद थियो। वास्वतमा गिरीकालीन पुस्ताले केवल दुःखमनाउ, लेघ्रो तनाइ, रूवावासी मात्र गरेका थिएनन्‌, ‘तिमी त यहॉं नचिनिने भएछौ,’ भन्दै पहिचानको निम्ति लड्‌ने आग्रह पनि अन्तर्यमा राख्दै थिए। दार्जीलिङको सन्दर्भमा यी कुरा नितान्तै नीजि र स्थानिक मानियो अनि वैचारिक लेखन भन्दै आए आयामीहरू। तर तेस्रो आयाम ‘लेख्ने तरिका’-को निम्ति गरिएको आन्दोलन थियो अनि विचार र सिद्धान्त चॉंहि विश्वचिन्तने थियो। विश्वचिन्तनलाई शैलीमार्का लेखनले उचालेपछि स्थानिक र जातिक विमर्श र विचार छोपियो।
नेपाली साहित्यको ऐतिहासिक दुर्भाग्य यही थियो। आयामका पछिल्ला सानासाना संस्करणहरूमा सङ्‌क्रमण र विचलनलाई लिन सकिन्छ। यसले पनि ‘कला’ लाई प्रमुखता दिने उत्तराधुनिकतावादी चेतको वकालत गर्‍यो। यस लेखनमा रहेकाहरूले वस्तुताको खोज गर्दै सम्पूर्ण लेखनको जुक्ति चलाए। वास्तवमा ‘सम्पूर्णता’ लेखनमा सम्भव नरहेको मान्दै विचारलाई ‘लीला’-मा ल्याइयो। ‘वस्तु त आफू जस्तो छ त्यस्तै पो देखिँदो रहेछ,’ इन्द्रबहादुर राई आफैले पछिबाट भने, ‘अलइलि छेउकुनामात्र देखिँदो रहेछ सम्पूर्ण देखिँदो रहेनछ।’ लीला लेखनले त्यही दृष्टिकोणको चरित्रलाई केलाएर कुनै पनि कुरा एकक्षण प्रभावकारी हुने अनि पछिबाट त्यही कुरा ‘युज टु’ हुने चेतलाई बुझ्ने ‘ज्ञान’ को पक्षमा बोल्यो। ती जम्मै लेखन राजनैतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि कुराहरूले समाजलाई पार्ने ‘प्रभाव’ लाई लेख्नुसित सम्बन्धित थियो। प्रभावका कारण खोज्नु र रिस्क लिनु थिएन। समाजलाई डोहोर्‍याउनु होइन, यथास्थिति देखाउनुमात्र थियो। मनप्रसाद सुब्बाहरूको किनारीकरणको लेखनले उनीहरूको समयमा नै विश्वमा चल्ती डिस्कोर्ष ‘सवाल्टर्न’ बाट नेपाली लेखनको निम्ति ठूलो स्पेस पायो। यसैकारण शुरूमा भारतीय नेपालीहरूलाई मूलस्रोतबाट बाहिर पारिएको राजनैतिक चेतलाई उनीहरूले काव्यिक स्वर बनाए। फरक के थियो भने गायत्री स्पीभाकहरूको सवाल्टर्नहरू बोल्न सक्दैन थिए मनप्रसाद सुब्बाका किनारीकृतहरू बोल्न सक्थे। त्यही बोलीलाई लेखनको मूल स्वर बनाउन यो लेखनको नितान्तै स्थानिक आग्रह पछिबाट वैस्थानिक बन्यो।
प्रादेशिक चेतना र विश्व चेतना दुवैलाई सँगसँगै लैजाने उनीहरूको अडान बन्यो। छुट्टै राज्यको दोस्रो चरणको आन्दोलनको प्रभाव सर्जकहरूमा बढी रहेको समय थियो यो। यसकारण जातीय मुक्ति, आत्मनिर्णय र पहिचानको सङ्‌कट कवितामा दह्रो बनिरहेको थियो। एक्लो एक्लो सर्जकभित्र रहेको यही चेतनालाई सङ्‌गठित गनर्र् सकिने स्पेस बोकेर आएको किनारीरणको लेखनबाट नै लगभग समकालीन कविताले समाजका ‘प्रभाव का कारणहरू’ समेत खोतलेर हेर्ने दिशा पायो। ‘सङ्‌क्रमण लेखन’-ले आयामकालीन बट्टारिएको भाषाबाट कवितालाई मुक्त गर्ने घोषणा नै गरेपनि कवितामा त्यो दुरूहता विधमान नै रह्यो। यो लेखनले नयॉंपुस्तालाई खास विचार दिन सकेन। यो लेखनको मूल स्वर पनि संरचना, रूप, कला, शैलीलाई ‘साहित्य’ मान्ने नै थियो। सुबास घिसिङले गरेको 1986 को छुट्टै राज्यको आन्दोलनको असफलताले समाजलाई पारेको निराशा, आक्रोश, विसङ्‌गतिलाई पोलिटिकल्ली र ओइडियोलजीकल्ली लेख्ने, मुख्यगरी राजनीतिक, अर्थनैतिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिकरूपमा समाजलाई परेकोे विविध प्रभाव र प्रभाव कारखाना उत्खनन्‌ गरेर लेख्ने चेत निर्माण नहुनुमा ‘कलावादी’ विचारको ठूलो रोल छ। विचलनसम्म आइपुग्दासम्म साहित्यमा प्रतिबद्ध राजनीति वर्जित नै थियो। पत्रपत्रिकामा एउटा आग्रह छापिन्थ्यो, ‘राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक आक्षेप र आग्रह रहेका रचनाहरू प्रकाशित हुने छैन।’
सम्पादकहरूमा यो मानसिकता रोप्ने खेल अघिल्ला कलावादी लेखनहरूमा रहेको विचारहीनताले खेलेको हो भन्न सकिन्छ। यसमा अझ बहस पुगेको छैन।
तेस्रो आयाम, लीला लेखनहरूले दिएको स्पेसबाट सङ्‌क्रमण, विचलन अनि अहिले समावेशी समूह अघि आएको अनि गिरीय जातीवोध र तेस्रो आयामकालदेखि यता प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रगतिवादी चेतनाको स्पेसबाट किनारीकरण अनि हस्तक्षेप लेखनले वैचारिक तार जोडिरहेको हो कि भन्ने लाग्छ। यद्धपि यी लेखनहरूका चारित्रिक विशेषताका अरू पाटोहरू पनि छन्‌, जसले एकले अर्काबाट केही फरक मूल्यमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छन्‌।
यहॉंबाट के सङ्‌केत मिल्छ भने एकधार कला कलाको लागि र अर्को धार कला जीवनको लागि भन्ने चेतले समकालीन लेखन निर्मित छ।
लेखनमा युवा पुस्ता
सङ्‌घीय भारतमा नेपाली भाषीहरूले गरेको सॉंस्कृतिक र राजनैतिक सङ्‌घर्षले जीवनमा ठूलो प्रभाव छोडेको छ। अल्पसङ्‌ख्यकहरूमाथि बहुसङ्‌ख्यकहरूको वर्चस्व सधैँ छ। जाति विविध सङ्‌कटबीच रहँदा उनीहरूको भाषा र साहित्य अछुत हुँदैन। यो थिचोमिचोको विरुद्ध राजनैतिक समाजले लड्‌दै आइरहेको छ। त्यही लडाईँको असफलता, केन्द्रको चलखेल, बजार र सत्ताले समाजलाई खोक्रो पारिरहेको छ। समाजमा विसङ्‌गति हुर्किरहेको छ। नेपाली समाजको राजनैतिक चेतना बोधो पारिँदैछ। सत्ताको पाइलामुनि परेको समाजको आवाज कस्तो हुन्छ? आजका एक लश्कर पुस्ताको काव्यिक स्वर त्यही बन्दै गइरहेको छ। अर्को लश्कर पुस्ता ‘यी त राजनीतिक कुरा भए, राजनीतिलाई राजनीतिमा नै राखौँ, साहित्यमा नल्याऔँ, भन्दै लेखनका नयॉं नयॉं शिल्पखोजमा छन्‌। दुइपुस्ता नै एकार्काको विचारमा जोखिम देख्छन्‌। एक पुस्तालाई लाग्छ, ‘समाजलाई राजनीतिले खोक्रो पारिरहेको समय, काव्यकलाले यसको विरुद्ध अनि समाजको पक्षमा राजनैतिक चेतनाको वकालत गर्नैपर्छ।’
अर्को पुस्तालाई लाग्छ, ‘यो काम राजनीतिले नै गर्छ, साहित्यजस्तो कलालाई भारी नबोकाऊँ।’
यही दुई विरपित विचारमा आजका पुस्ता विभाजित छन्‌। विश्वभरि नै यी दुइथरिका विचार पुस्ता छन्‌। आ-आफ्नो जोखिम मोलिरहेका छन्‌।
के भन्छन्‌ अघिल्लो पुस्ता?
सोसल मिडियामा बेलाबेला कविहरूको धम्साधम्सी चल्छ, विवादको केन्द्र हुन्छ-कविता। उत्तराधुनिकतावादी भ्रमले ग्रस्त कविहरूलाई जनपक्षीय कविता नपच्ने अनि जनपक्षीय कविहरूलाई रतिलेखन नरुच्ने पुरानै रोग निरन्तर छ। विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने भारतीय नेपाली समाजको सन्दर्भमा दार्जीलिङले आजका पुस्ताबाट पढ्‌न लायक कविताहरू प्राप्त गरेको छ। आजका पुस्ता अध्ययनशील र वैचारिकरूपले विश्वासिलो र प्रतिबद्ध देखिन्छन्‌। सोसल मिडियातिर देखिएका बहस, सार्वजनिक कार्यक्रमतिर हुने तर्कातर्कीहरूले आजका पुस्ता लेखनमा गम्भीर रहेको अघिल्लो पुस्ताका कवि ज्ञानेन्द्र खतिवडा स्वीकार्छन्‌। ‘कविताको गरिमामा आँच आउन दिने कार्य अहिलेका युवा जमातबाट हुनसक्दैन भन्ने विश्वास लिएको छु,’ उनी भन्छन्‌, ‘कविता-कलालाई मर्यादित बनाउने जमातहरू सीमान्तकृत वर्गसम्म पनि देख्नसक्ने दृष्टि लिएर सिर्जनामा लागेका छन्‌ भन्ने विश्वास छ।’ आजका पुस्तामा जुन पढ्‌ने र बहस गर्ने संस्कृति निर्माण भएको छ उनीहरूको समयमा यस्तो थिएन। ‘कविता लेख्ने विषय हो ,पढ्ने विषय त कथा र उपन्यास मात्र हो भन्ने समय थियो हाम्रो।
कविहरू अर्काका कविताहरू पढ्दैनन्‌ थिए,’ खतिवड़ा भन्छन्‌, ‘अहिले वैचारिकरूपमा युवा कविहरू सॉंच्चै तिक्खर छन्‌।’ उनीहरूकोे युवा अवस्थामा एकातिर मोहन कोइरालाको फर्सीको जरामा जेलिएको अवस्था थियो भने अर्कातिर आयमेली कविताहरूले बेह्रिरहेको अवस्था थियो। उनीहरूले भूपि र हरिभक्तहरू अलिक ढिलो पाए। ‘आज युवा कविहरूसित हाम्रो युवाकालको तुलना हुनैसक्दैन। विचार भाव शैली भाषा र उन्मुक्त लेखनको अवस्था नै हालका युवा कविहरूको परिचय हो,’ उनी भन्छन्‌, ‘वर्तमान युवा कविहरूले देख्नसक्ने छिद्र र लेख्नसक्ने आँट पनि अर्को तुलना हुननसक्ने पाटो हो।’ कवि मनप्रसाद सुब्बाले पनि युवा पुस्ताले कवितालाई लिएर चलाउने बहसलाई सराहना गर्छन्‌। कविताका राम्रो पाठक रहेेका कथाकार मिङ लिवाङलाई युवा पुस्तामा चलिबस्ने विवाद, बहस सकारात्मक हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। ‘नकारात्मक पूर्वाग्रह वैयक्तिक बहस र चर्चाले कसैलाई फायदा पुर्‍याउँदैन,’ भन्छन्‌, ‘यद्धपि के र कसरी लेख्ने सम्बन्धमा दिशानिर्देश गर्नु विचार थोप्नु हो।’
के भन्छन्‌ आजका पुस्ता?
युवा कविहरू बहस पनि गर्दै कविता पनि लेखिरहेका छन्‌। सैद्धान्तिक आधारजेजस्तो होस्‌, उनीहरूको मुल्याङ्‌कन भने कविताको कारण नै हुन्छ। कवितालाई समाजउपयोगी विचार दिन कवितालाई कलात्मक बनाउनेहरूको भीड़ ठूलै छ। बजारमा धेरै कुरा सुनिन्छ, ‘युवा पुस्ताका कवितामा विचारको प्राधान्य बढी भयो, कलात्मक छैन्‌ उनीहरू।’ पछिल्लो समय राम्रा कविता लेखिरहेका कवि रवि रोदनलाई तर विचारले समाज तोड्‌ने होइन बरू जोड्‌ने काम गर्ने बताउँछन्‌। ‘समयचेती युवा पुस्ता समाजको अचेत अवस्थाहरूमाथि उज्यालो पार्न कविकर्म गरिरहेका हुन्‌,’ तिनी भन्छन्‌, ‘समयलाई सम्बोधन गर्नु युवा पुस्ताको दायित्व हो।’ तिनी आफै पनि समाजको अनुहारमा देखिएको असमानताका कुरूप पेन्टिङ विरूद्ध सहास बटुलेर काव्यकलाले बोल्नु, समयको मुद्दा बोकेर त्यसमाथि बहस गर्नु, हित र अधिकारको निम्ति वैचारिकरूपले लड्‌नु, समाजको जटिलतालाई देखाउनु र त्यसको उत्थानको निम्ति केही गर्नु, विगतका भूलहरूबाट केही चेत्दै सिक्दै प्रगतिशील चेतनाको विस्तारणमा लाग्नु काव्यकर्ममा लागेको स्वीकार्छन्‌।
कवि बस्ने जुन समाज छ, त्यो समाजमा पुग्दा धेरैवटा कविता पज्जलखेल बन्ने दुर्भाग्य अझ पनि छँदैछ। आजको पुस्ता यस्तो जोखिमबाट बाहिर निस्किने प्रयासमा छन्‌। रवि रोदनको पुस्ता समकालीन कवितामाथि बहस अनिवार्य ठान्छन्‌। कविताको गरीमालाई पनि बचाउँदै कवितालाई जनमुखी बनाउँदै लैजाने चेतना आजको चेतना बनेको छ। कविता चाम्रो भएको निबन्धकार अजय खड्‌कालाई मनपर्दैन। समाज जुनरूपमा छ, कवितालाई त्यही अनुकूलको भाषामा कलात्मक र वैचारिक बाटो प्रदान गर्नु युवापुस्ताको जिम्मेवारी हो भन्ने तिनको मत छ। शक्तिशाली कविताको नापो विषयवस्तु र सम्प्रेषणशिल्पमार्फत गर्न सकिने र कला र विचारको सही समायोजनमा खास कविता आउनसक्ने पनि तिनको धारणा छ। युवापुस्ता दुई वैचारिक ध्रुवमा रहेपनि कवितामा आफू र आफ्नो समाज आउनुपर्ने कुरामा तिनलाई विश्वास लाग्छ। ‘यद्यपि कविताको स्वर सशक्त र सङ्‌गठित तवरमा आउनसके राम्रो हो,’ भन्छन्‌, ‘तह मिलेर प्रभावकारी रूपमा कविता आए, कविताले आफ्नो वास्तविक शक्ति प्राप्त गर्नसक्छ।’
दार्जीलिङ, सिक्किम तथा भारतका अन्य ठाउँमा रहेका नेपाली भाषीहरूबाट नै भारतीय नेपाली साहित्य लेखिने हो। भोगौलिक, प्रशासनिक, राजनैतिक अनि सांस्कृतिक प्रभावहरू उनीहरूले लेखिएको साहित्यमा आएन भने त्यो लेखनको खास प्रयोजन कति हो भन्ने कुरा कठघरामा पर्छ। पश्चिम बङ्‌गालमा रहेको दार्जीलिङ राजनैतिक, अर्थनैतिक अनि सॉंस्कृतिक बुटमुनि छ। राजनैतिकरूपले यी प्रभावका कारणहरू खुट्याउँदै प्रतिरोधी चेतना बोक्ने कविहरूले दबेको समाजमा कवितालाई ‘डिस्कोर्स’ बनाउँदै आइरहेका छन्‌। यसो हुँदा कति कवितामा आक्रोसले सौन्दर्यकोरूप लिएको छ। ‘आक्रोसित समाजमा बस्ने कवि सधैँ शालिन भइराख्न सक्दैनन्‌,’ कविहरू भन्छन्‌, ‘अबको कवितामा शोषक र शोषितले एकै ठाउँ पाउँदैन।’ उनीहरू भन्छन्‌, ‘वैचारिकरूपले समाजलाई उठाउने चेत राख्नेहरूले हस्तक्षेपी विचार बोक्नु आजको समयसित हिँड्‌नु हो।’
अर्को समूह राजनीतिदेखि पर छन्‌। उनीहरूको निम्ति कविता ‘आर्टवर्क’ मात्र हो। ‘विचार र समाज रुपान्तरणमा कविताको कुनै भूमिका हुँदैन,’ ठान्छन्‌ उनीहरू, ‘कवितालाई कविता मात्र बनाइराख्न विविध प्रयोगहरू चाहिन्छ, विचार र चेतना यही लगानी गर्नुपर्छ।’ उनीहरू भन्छन्‌, ‘समाज एकै विचारले बनिँदैन, सबै विचारहरूको समावेशिकरण आजको माग हो।’
डा. बासीले भने-‘चोट नै नलागी दुख्नेहरूको संसार हो यो। दुख्नु त्यो संसारको सबैभन्दा ठूलो दुःख हो। दुःखसित लड्‌न बनिएको जीवनमा हामी सुखहरूको खोज गरिबस्छौं। सुख भनेको दुःखहरूको कॉंड़ाघारीमा नै पाइने कुरा हो। तपाईँको आँखा दुखेको कारण खोज्न मैले आँखाको इतिहास जान्नुपर्छ। त्यो इतिहास पनि तपाईँले भन्ने हो। कोहीबेला आफ्नै दुःख व्यक्त गर्न सकिँदैन। इतिहास भन्न सकिँदैन। हामी सुनेर उपचार गर्ने कोशिष गर्छौं। तपाईँ र मबिचको सम्बन्ध भनेको दुइवटा आँखाबिचको जस्तो हुनुपर्छ।’
आँखाको उपचार गर्न गएँको म कविता सुनेर फर्किएको थिएँ। तिनी कवि त होइनन्‌ तर तिनी बोल्दा मलाई कुनै सुन्दर कविता सुनिरहेछु जस्तो लागिबस्यो। तिनी बोलिरहँदा म कविता सुनिरहेको हुन्थेँ। किन मलाई तिनका कुराहरू कविता लागेे? हिन्दीका कवि धुमिलको कुनै सुन्दर कविता पढ्‌दैगर्दा आँखा मधुरो भयो। फुलापरेजस्तो मोती ढाकेको। त्यसपछि तुरन्तै डा. बासीकहॉं पुगेँ अनि कविता सुेर फर्किएँ। पढ़िराखेर गएको र घइसकेपछि सुनेको दुवैको कुरा सुन्दर थियो।
धुमिलले लेखेका छन्‌-
शब्द कसरी कविता बन्छ हेर
अक्षरहरूको बीचमा खसेको मान्छेलाई पढ़।
अथवा माटोमा खसेको रगतको रङ?
जसको मुखमा लगाम छ।
डा. बासी र धुमिल मसित जोडियो। हामीलाई जोड्‌ने पुल थियो संवाद।
शब्दहरूको बीचमा खसेको मान्छेको संघर्षले कविताको स्वरुप माग्दोरहेछ। जुन परिस्थितिमा म छु, मेरो वर्तमान छ र यसले मलाई मेरो चिह्नारी सधैँ माग्छ। तर हाम्रो उपस्थितिलाई लिएर जुन राजनैतिक चलखेल छ त्यो लोहारेको विम्वमा उज्यालो बन्छ। म त घोडा हुँ। मलाई फलामको स्वाद कसले सोध्छ?
दुःखको बेलोे खोज्न कसले सक्छ? त्यो बलवानसित अन्तर्वार्ता लिन चहान्छु म। सोध्न चहान्छु दुखको रङ कतिवटा हुन्छ? यसको जरा कतिवटा हुन्छ? कवि साथी निमा शेर्पा भन्छन्‌, ‘देश भनेका े छोरोले बनाएको शीर अलिक बाङ्‌गो भएको मानचित्र त होइन।’
म आफै पनि लेख्छु, ‘रतन्धो देश गाउँ देख्दैन।’
कवि मनप्रसाद सुब्बाले सवाल्टर्नको शीर लेखे। किनारीकृतहरूको स्वरमा देखिने पातलो निकासको रापले आखिर कसलाई पोल्छ? लेखनाथ छेत्रीको केटाकेटी कवितामा भनिएको ‘हामीलाई जहिल्यै केटाकेटी नै ठानिबस्ने केन्द्रिय मनोभाव छिचोल्ने केटाकेटी पनि बन्न सक्दैनौहामी? हामीलाई दार्जीलिङ पनि देश लाग्छ तर देशमा बसेर देश देख्न नपाइनु, देश भोग्न नपाइनुको दुःखले फैलाइरहेको जङ्‌गलभित्र हराइरहेको मानिसको कथाले पोल्छ।
दार्जीलिङबाट भइसकेको दुइवटा उद्देश्यहीन आन्दोलन पनि आखिर किनारा परेकाहरूको सार्वजनिन्‌ पीढा नै त हो। केन्द्रसितको लडाईँमा हिँडिएको किनाराको बाटो पनि केन्द्रतिर नै फर्किएको हुन्छ। अहिलेलाई भारतीय नेपालीहरूको सार्वजनिन पीड़ा भनेको ‘जातीय उन्मुक्ति’- मात्र होइन। किन भने कुनै पनि जातिको उन्मुक्ति सम्भव छैन। जातीय मुक्तिको अवधारणाले हामीलाई तान्छ किन भने यो सार्वजनिन पीड़ा हो। त्यो सार्वजनिन पीड़ालाई कहीँ लगेर मिल्काउन मिल्छ? अथवा त्यो सामुहिक दुःखलाई त्यतिकै छोड़ेर कुनै पनि कवि भाग्न मिल्छ? किन नेपालका कविहरूको झुण्ड सडकमा ओर्लिएका? किन दार्जीलिङमा मनप्रसाद सुब्बाहरू किनारामा पारिएको गाथा गाइरहेका हुन्‌? किन प्यालेस्टानी रफिफ जियादाहरू सेड्‌स अफ एङ्गर लेखिरहेका? किन कर्नाटकमा कलबुर्गीहरू गोली खाइरहेका?
इतिहास केलाएर बस्नेहरूको दुःखको बेलो कहॉं छ? किन बिहारका अरूणाभ सौरभहरू ‘साला बिहारी’ -ले मुख खोल्यो कि गाली खाइरहेका कथा सुनाइरहेका? किन निर्मता पुतुलहरू सङ्घीय भारतमा आदिवासीहरूको सांस्कृतिक दोहनको कविता लेखिरहेका छन्‌? किन नेपालमा रावतहरू अर्कै राजधानीको कुरा गरिरहेका हुन्‌? किन आहुतीहरूले नेपालमै गहुँगोरो अफ्रिका भेटिरहेका हुन्‌? यो दुःखको जरा चिन्ने कविहरू के अपराधी हुन्‌? बहिरा, लङ्‌गडो र लाटा हुन्‌?
धेरैवटा कविता पढ़ेको छु, जो फूलझै सुन्दर हुन्छन्‌। उनीहरू मिठो भाषामा बोल्छन्‌, दुःखका सुखका, मायाका, मानिसका कथाहरू सुनाउँछन्‌। तर के सुनाएको हुन्‌ यी कविले? सोध्दै जॉंदा लाग्छ, तिनी केवल कविता मात्र सुनाइरहेका हुँदारहेछन्‌। नितान्तै हल्ला गरेर सुनाइरहेका कविताको स्वर चॉंहि ठ्याम्मै नसुनिने। कविताको भाषा चॉंहि मिठो, गुदी चॉंहि काम नै नलाग्ने। मानो उसको कविता हल्ला गरिबस्ने लाटो हो। नेपालको आजको सङ्‌कट, भारतका आदिवासीहरूको सङ्‌कट, भारतीय नेपालीहरूलाई सङ्‌घीय सत्ताले किनारामा पारेका नेपालीहरूको सङ्‌कटलाई लात हानेर सुत्ने कोही माइकलाल कवि हुन सक्छन्‌?
शङ्‌कर लामिछानेको संवाद थियो, ‘मेरो सेन्सिटीभीटीमा ठेला पर्‍यो।’ सेन्सिटीभिटीमा ठेला परिरहेको जमातले यदि सौन्दर्यको कुरा गर्‍यो भने के हुन्छ? विचारको कुरा गर्‍यो भने के हुन्छ? कलाको कुरा गर्‍यो भने के हुन्छ? निश्चितरूपमा नै समाज दुर्घटनामा पर्छ। सामाजिक अन्तरविरोधहरू ठिम्याउन नसक्ने एन्टेना बोकेकाहरू आँखै सामु लड़िरहेका लाश देखेर रमाउँछन्‌ र लेख्छन्‌ कविता-
‘यी लाशै लाशका फूलहरूबाट आएको सङ्‌गीतमा
नाचिरहेको छु म।
आकासको त्यो छातीमा निदाइरहेको बालक
गोठाला बसिरहेका छन्‌
कोहीबेला ‘फल्स सन्सियसनेस’ एकदमै मिठोरूपमा अघि आउँछ। त्यसको मुखौटाभित्र लुकेको अनुहार कुनै बिद्रोही झैँ लाग्छन्‌। कुनै कवि झैं, सन्त झैँ, विचारक झैँ, दार्शनिक झैँ लाग्छन्‌। वास्तवमा यस्ता ‘झैँहरू’ बेहद खतरनाक हुन्छन्‌। तर उसले शङ्‌कर झै कहिल्यै घोषणा गर्दैनन्‌- ‘मेरो सेन्सिटीभीटीमा ठेला पर्‍यो।’
आखिर किन संवेदनशीलताले मानिसलाई भुँइमा झार्छ? अहिले म भारतको यस्तो नागरिक हुँ जसलाई स्यानो संवेदनशीलताले भ्यागुता बनाउँछ। उन्मुक्तिको निम्ति जुलुस गइरहेका मेरा आफन्तहरूको निधारमा जब सरकारी पुलिसको गोली पस्छ, अल्पसंख्यक भएकै नातामा मेरो बोली थुनिन्छ?
खासमा बोली थुनिन्छ? हामीलाई लाग्छ, बोल्नु नितान्तै असुरक्षित लगानी हो। त्यसको जोखिम कविले किन उठाउने? यहीँनेर अन्तरविरोधलाई अध्ययन गर्ने संस्कृतिमा आदिकालदेखि रहेको ‘परम्परा’ चिन्ने ठाउँ हुन्छ।
अल्वेयर कामुले भनेछन्‌, ‘मुक्ति सम्भव छ तर अगम्य रहस्यमकताको माध्यमबाट होइन तर व्यक्तिको सम्पर्कमा आएर नै हुन्छ।’ त्यो व्यक्तिको सम्पर्कमा कस्ता कविहरू आउन सक्छन्‌? यहीँनेर सायद विचारका कित्ता बॉंड़िन्छन्‌। कामुले नै भनेका छन्‌, ‘मान्छे हुनु सबैभन्दा कठिन काम हो, तर यो भन्दा पनि कठिन काम हो एकार्काबिच संवाद स्थापित गर्नु।’ समाजमा छाइरहेको मौनता (चुप्पी), असंवेदनशीलता, मूल्यहरूको विनाशको शैल्यक्रिया लाटा कविले गर्छ कि संवाद गरिरहेका कविले?
राम्रा कवि मनु मन्जिललाई सोधु म?
डा. बासीले कोट्याएको समस्यालाई रोगी र डाक्टरबीचमात्र राख्न मलाई मन लागेन। आँखाको स्यानो समस्या बुझ्न डा. बासीले आँखाको इतिहास सोध्छन्‌ भने समाजको समस्या बुझ्न समाजको इतिहास समाजलाई सोध्न पर्दैन? जुन समाजले इतिहास भन्न सक्दैन, त्यो समाजले सपनाको हत्या गर्छ। हाम्रो इतियास कसले खड़ा गरेको हो? के हाम्रो पनि इतिहास छ? समाजसित संवाद गरिरहेका कुनै कवि भेटिए मलाई लाग्छ उसित यही प्रश्न छन्‌। यसैकारण उ आफैभित्रका अन्तरविरोधहरूसित लड़िरहेका छन्‌। किन? शायद केही सोचिरहेका मानिसभित्र नै प्रश्नहरू उठ्‌छन्‌। जोभित्र प्रश्न नै उठ्‌दैन उ संवादका हत्यारा हुन्‌।
हामी भारतीय नेपाली केही युवा कविहरू ‘संवाद’-को समाजशास्त्रलाई फेरि उल्टाएर हेरौँ कि भनिरहेका छौँ। किन भने हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ, हामीले इतिहाससित गरेको संवादमा कहॉंकहॉं सत्य छुट्यो त? भारतीय नेपालीहरूको इतिहासमा संवादहीनता किन जमेर बस्यो? त्यो साहित्यमा किन छ्‌याङ्‌गै देखियो? मलाई लाग्छ, चोट नै नलागी दुख्नेहरूको इतिहासले सार्वजनिन‘दर्द-’को टुप्पो भेट्‌न सक्दैन। कवि अलग्गै कलारतिमा मात्र बसिदिने हो भने समाजसित कसले संवाद गर्ने? के भन्ने पाठकलाई? के दिने? कसरी दिने? हाम्रा दैनन्दिनीको आकासमा विज्ञापन, मल्टिकम्पनी र उत्पादन केन्द्रहरू जूनतारा भएर बस्छ। घामपानी भएर बस्छ। जतै फर्किए पनि मलाई चाहिएको वस्तु ठीक्क मैले सोंचे झैं नै पाइन्छ। तर जुन यहॉं औपनिवेशिक हैकम छ, सत्ताको चलखेल छ, कम्पनीहरूको मनोपोली छ, त्यसले गरेको जुन सँस्कृति र मूल्यमाथिको दोहन छ, यो अन्तरविरोध, द्वन्द्वबारे कसले संवाद गर्ने? हो, बेलाबेला हर्बर्ट रिडले भनेजस्तो ‘मान्छेसित गल्ती र अपूर्णता सधैँ जोडिएको हुन्छ’ भन्ने विचलनलाई पनि स्वाकीरेर बसिदिनै सकिन्छ। तर सधैभर चुपचाप बस्ने समय हुँदैन। त्यो गल्ती र अपूर्णताको खोज नै प्रकृति हो। यो जीवित यथार्थ हो। यो गतिमान छ। यसलाई पन्साएर कोही बस्न सक्छन्‌?
यतिखेर राजनीति जो पोखरीभर जमेर बसेको हिलोपानी छ र त्यहॉंभित्र छौं हामी केही भुराभुरी माछा। जहॉं आम संवादले राजनैतिक स्वार्थले लिपिएको भित्ता चर्काउन सक्दैन। यस्तोमा जुन कविता लेखिरहेका छौं, यसले गर्ने संवाद कसको निम्ति हो त? म अहिले डा. बासीले औंल्याएको दुःखतिर फर्किएको छु। अथवा म एउटा सुखलाई सम्बोधन गर्न खोजिरहेको छु। एउटा सपनालाई पछ्‌याउन खोेजिरहेको छु। यो मेरो कुनै अपराध होइन। यस्तोमा जुन संसारभरि आआफ्नै अस्तित्वको दाबीमा आम स्वैरकल्पना छ, यसलाई घर लिप्दै बस्ने बढ़ी आमाभित्र कसरी खोतल्नु? जो कवितादेखि हज्जारवर्ष पर छन्‌। आमा र कविताबिच हुने संवाद कसले मारिरहेको छ? फेड्रिक नित्सेले ईश्वरलाई मारेर जुन मनुष्यकृत संसार व्यवस्थाको कुरा गरे, रोला बार्थको लेखकीय सत्ता सिर्जना बाहिर पर्ने र सिर्जनादेखि टाड़ा कुनै जङ्गलमा पुगेर सिर्जनपछि आखिरमा लेखकले आत्महत्या गर्ने द्वीअर्थि इल्युजनले मेरो घॉंटी निमोठिरहेको छ। शङ्‌कर लामिछानेले जस्तो ‘म आजको समयको मान्छे होइन’ भनेर म आजकै समाजबाट कतिदिन टाड़ा बस्नुसक्छु? किन भने मैले सास फेरिरहेको हावा आजकै छ। मैले टेकिहेको भुइँ आजकै छ। मैले भोगिरहेको समस्या आज कै छ। म कुनै प्राचीन हावालाई मिथक बनाएर सास फेरिरहन सक्दिन। यतिखेर म धेरै कुरा भन्न खोजिरहेको छु,तर मेरो कुरा तपाईँसम्म पुग्दैपुग्दैन। भन्नुहोस्‌ त, कसले गर्‍यो संवादको हत्या? को हुन संवादका हत्यारा?